November 2017 | Language Century Language Century
ကားလမ်းပေါ်က အဝိုင်းကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
5:13 PM C-Word , Chinese
မြို့ပြရဲ့ ကားလမ်းမတွေပေါ်မှာ ကားတွေကွေ့သွားရတဲ့ အဝိုင်းတွေကို သင်တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။
(n) 环 huán စက်ဝိုင်း။ ကွင်း
(n) 岛 dǎo ကျွန်း
(n) 环岛 huán dǎo
Kāi dào Hàndáwàdǐ huándǎo xiàng zuǒ guǎi.
ဟံသာဝတီအဝိုင်းကို မောင်းသွားပြီးရင် ဘယ်ကွေ့ပါ။
☞ သိထားသင့်သော ဝေါဟာရများ ☜
(n) 交通灯 jiāo tōng dēng
(n) 交通警察 jiāo tōng jǐng chá
(n) 交通规则 jiāo tōng guī zé
(n) 驾照 jià zhào
(n) 红灯 hóng dēng
(v.o) 闯红灯 chuǎng hóng dēng
(n) 过街天桥 guò jiē tiān qiáo
(n) 人行横道 rén xíng héng dào
ကားလမျးပျေါက အဝိုငျးကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
မွို့ပွရဲ့ ကားလမျးမတှပေျေါမှာ ကားတှကှေသှေ့ားရတဲ့ အဝိုငျးတှကေို သငျတှဖေူ့းပါလိမျ့မယျ။
(n) 环 huán စကျဝိုငျး။ ကှငျး
(n) 岛 dǎo ကြှနျး
ဟံသာဝတီအဝိုငျးကို မောငျးသှားပွီးရငျ ဘယျကှပေ့ါ။
☞ သိထားသငျ့သော ဝေါဟာရမြား ☜
菊花 jú huā ရဲ့ အခြားအဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ။
5:07 PM C-Word , Chinese
菊花 jú huā ဆိုတာက အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ပန်းတစ်မျိုးရဲ့ အမည်ပါ။
ဒါပေမယ့် 菊花 jú huā ရဲ့ တခြား အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုက စအိုကို ပြောတာပါ။ ပုံသဏ္ဍာန်အရ အဲဒီပန်းပုံနဲ့ ဆင်တူလို့ပါ။ မြန်မာတွေကတော့ ခရေပန်းနဲ့ ခိုင်းနိူင်းပြောကြပါတယ်။
ဒီအသုံးအနှုန်းက အဓိပ္ပာယ်အရ ညစ်ညမ်းပေမယ့်လည်း နိုင်ငံခြားဘာသာစကား လေ့လာသူတွေအနေနဲ့ အသုံးများတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိထားသင့်ပါတယ်။
(v) 爆 bào ပေါက်ကွဲသည်
(n) 菊花 jú huā ဂန္ဓမာပန်း
(v.o) 爆菊花 bào jú huā
*** –င် –ျ သည်
(မရေးသင့်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားနော်)
Bào nǐ jú!
မင်းကို –င် –ျ မယ်။
☞ ဆက်စပ် ဝေါဟာရများ ☜
(n) 肛门 gāng mén
(n) 屁眼 pì yǎn
菊花 jú huā ရဲ့ အခွားအဓိပ်ပာယျက ဘာလဲ။
菊花 jú huā ဆိုတာက အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး ပနျးတဈမြိုးရဲ့ အမညျပါ။
ဒါပမေယျ့ 菊花 jú huā ရဲ့ တခွား အဓိပ်ပာယျတဈခုက စအိုကို ပွောတာပါ။ ပုံသဏ်ဍာနျအရ အဲဒီပနျးပုံနဲ့ ဆငျတူလို့ပါ။ မွနျမာတှကေတော့ ခရပေနျးနဲ့ ခိုငျးနိူငျးပွောကွပါတယျ။
ဒီအသုံးအနှုနျးက အဓိပ်ပာယျအရ ညဈညမျးပမေယျ့လညျး နိုငျငံခွားဘာသာစကား လလေ့ာသူတှအေနနေဲ့ အသုံးမြားတဲ့ ဝေါဟာရတှကေို ထဲထဲဝငျဝငျ သိထားသငျ့ပါတယျ။
(v) 爆 bào ပေါကျကှဲသညျ
(n) 菊花 jú huā ဂန်ဓမာပနျး
*** –ငျ –ြ သညျ
(မရေးသငျ့လို့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ စဉျးစားနျော)
မငျးကို –ငျ –ြ မယျ။
☞ ဆကျစပျ ဝေါဟာရမြား ☜
ထီထိုးတာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
5:02 PM C-Word , Chinese
ထီထိုးတယ်ဆိုတာကလည်း စိတ်ကူးယဉ်စရာကောင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါ။ သင်ရော ထီထိုးဖူးပါသလား။
(n) 彩票 cǎi piào ထီလက်မှတ်
(v) 买 mǎi ဝယ်သည်
(v.o) 买彩票 mǎi cǎi piào
Jīntiān wǒ mǎi le yì zhāng cǎipiào.
ဒီနေ့ ငါ ထီတစ်စောင် ထိုးလိုက်တယ်။
(v) 中彩 zhòng cǎi
(n) 中奖号单 zhòng jiǎng hào dān
(n) 彩票局 cǎi piào jú
(n) 开彩 kāi cǎi
(n) 奖金 jiǎng jīn
(ph) 十亿缅币 shí yì miǎn bì
Rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào shénme shì xīwàng, mǎi yì zhāng cǎipiào;
rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào shénme shì juéwàng, mǎi yì duī cǎipiào.
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာဘာလဲ သင်သိချင်ရင် ထီတစ်စောင် ထိုးကြည့်ပါ၊
မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်းဆိုတာဘာလဲ သင်သိချင်ရင် ထီတစ်အုပ် ထိုးကြည့်ပါ။
☞ ဗဟုသုတ ☜
"ထီ" ဆိုတာ မြန်မာစကား မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က အင်္ဂလိပ်အစိုးရက မြန်မာပြည်မှာ ထီစနစ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ lottery ကို မြန်မာလူမျိုးတွေက "လောထီ" လို့ အလွယ်ခေါ်ရာကနေ ကာလကြာလာတော့ "ထီ" ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပါ။
ထီထိုးတာကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
ထီထိုးတယျဆိုတာကလညျး စိတျကူးယဉျစရာကောငျးတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတဈခုပါ။ သငျရော ထီထိုးဖူးပါသလား။
(n) 彩票 cǎi piào ထီလကျမှတျ
(v) 买 mǎi ဝယျသညျ
ဒီနေ့ ငါ ထီတဈစောငျ ထိုးလိုကျတယျ။
မြှျောလငျ့ခကျြဆိုတာဘာလဲ သငျသိခငျြရငျ ထီတဈစောငျ ထိုးကွညျ့ပါ၊
မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့ခွငျးဆိုတာဘာလဲ သငျသိခငျြရငျ ထီတဈအုပျ ထိုးကွညျ့ပါ။
"ထီ" ဆိုတာ မွနျမာစကား မဟုတျပါဘူး။ အင်ျဂလိပျခတျေက အင်ျဂလိပျအစိုးရက မွနျမာပွညျမှာ ထီစနဈကို စတငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ အင်ျဂလိပျဝေါဟာရ lottery ကို မွနျမာလူမြိုးတှကေ "လောထီ" လို့ အလှယျချေါရာကနေ ကာလကွာလာတော့ "ထီ" ဆိုပွီး ဖွဈလာတာပါ။
ခြေရင်း၊ ခေါင်းရင်း - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
4:56 PM C-Text , Chinese
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်တွေမှာ ခြေရင်း၊ ခေါင်းရင်းဆိုတာက အရေးကြီးတဲ့ နေရာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
(n) 床头 chuáng tóu ခေါင်းရင်း
(n) 床尾 chuáng wěi ခြေရင်း
☞ မှတ်သားရန် ဗဟုသုတ ☜
Miǎndiànrén shì tàiyáng shēngqǐ de dōngfāng wéi jíxiáng de fāngxiàng, rènwéi dōngfāng shì Shìjiāmóuní chéngfó de fāngxiàng.
မြန်မာလူမျိုးတွေက နေထွက်ရာ အရှေ့အရပ်ကို မင်္ဂလာရှိတဲ့ အရပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ အရှေ့အရပ်ဟာ မြတ်စွာဘုရား (သကျမုနိ) ပွင့်တော်မူရာ အရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြတယ်။
Suǒyǐ Miǎndiànrén jiālǐ de fókān dōu gòng zài shìnèi dōng qiáng shang.
ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်ထဲရှိ ဘုရားစင်တွေ အားလုံးကို အိမ်အတွင်းက အရှေ့ဘက်နံရံပေါ်မှာ ပူဇော်ထားကြပါတယ်။
Yīncǐ shuìjiào shí, tóu bìxū cháo dōng jìhuì cháo xī,
ဒါကြောင့် အိပ်တဲ့အခါမှာ၊ အရှေ့အရပ်ကို ခေါင်းပြုရပြီး၊ အနောက်အရပ် ခေါင်းပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားရပါတယ်။
fǒuzé shì duì fó de diànrǔ, huì zhāozhì bú xìng.
အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဘုရားရှင်ကို စော်ကားရာရောက်ပြီး၊ အကုသိုလ်တွေ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။
Miǎndiànrén hái rènwéi xīfāng shì sǐshén jūzhù de dìfāng.
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အနောက်အရပ်ကို သေမင်းနေထိုင်ရာ အရပ်ဒေသအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ကြပါသေးတယ်။
gǔdài Miǎndiàn guówáng zhǎn shā fànrén shí, dōu shì chū gōngdiàn xīmén,
ရှေးတုန်းက မြန်မာဘုရင်တွေဟာ ရာဇဝတ်သားတွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့အခါ၊ နန်းတော် အနောက်တံခါးကနေ ထွက်ရပါတယ်။
suǒyǐ shuìjiào juéduì bù néng tóu cháo xī shuì.
ဒါကြောင့်မို့ အိပ်တဲ့အခါ အနောက်အရပ်ကို လုံးဝ ခေါင်းပြုလို့မရပါဘူး။
Miǎndiànrén bǎ dōngmiàn hé nánmiàn chēng wéi tóudǐng bù, bǎ xīmiàn hé běimiàn chēng wéi jiǎowěi bù.
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အရှေ့ဘက်နဲ့ တောင်ဘက်ကို ခေါင်းရင်းပိုင်းလို့ ခေါ်ပြီး၊ အနောက်ဘက်နဲ့ မြောက်ဘက်ကို ခြေရင်းပိုင်းလို့ ခေါ်ကြတယ်။
Jiā zhōng zhǎngzhě de zuòwèi zài tóudǐng bù, wǎnbèi de zuòwèi zài jiǎowěi bù.
အိမ်မှာ လူကြီးပိုင်းတွက ခေါင်းရင်းမှာ နေရပြီး၊ လူငယ်ပိုင်းတွေက ခြေရင်းမှာ နေကြရပါတယ်။
ခွရေငျး၊ ခေါငျးရငျး - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ အိမျတှမှော ခွရေငျး၊ ခေါငျးရငျးဆိုတာက အရေးကွီးတဲ့ နရောသတျမှတျခကျြတဈခု ဖွဈပါတယျ။
(n) 床头 chuáng tóu ခေါငျးရငျး
(n) 床尾 chuáng wěi ခွရေငျး
☞ မှတျသားရနျ ဗဟုသုတ ☜
မွနျမာလူမြိုးတှကေ နထှေကျရာ အရှအေ့ရပျကို မင်ျဂလာရှိတဲ့ အရပျအဖွဈသတျမှတျပွီး၊ အရှအေ့ရပျဟာ မွတျစှာဘုရား (သကမြုနိ) ပှငျ့တျောမူရာ အရပျအဖွဈ သတျမှတျထားကွတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ အိမျထဲရှိ ဘုရားစငျတှေ အားလုံးကို အိမျအတှငျးက အရှဘေ့ကျနံရံပျေါမှာ ပူဇျောထားကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အိပျတဲ့အခါမှာ၊ အရှအေ့ရပျကို ခေါငျးပွုရပွီး၊ အနောကျအရပျ ခေါငျးပွုခွငျးကို ရှောငျရှားရပါတယျ။
အဲဒီလိုမှမဟုတျရငျ ဘုရားရှငျကို စျောကားရာရောကျပွီး၊ အကုသိုလျတှေ ဖွဈစလေိမျ့မယျ။
မွနျမာလူမြိုးတှဟော အနောကျအရပျကို သမေငျးနထေိုငျရာ အရပျဒသေအဖွဈလညျး သတျမှတျကွပါသေးတယျ။
ရှေးတုနျးက မွနျမာဘုရငျတှဟော ရာဇဝတျသားတှကေို ခေါငျးဖွတျသတျတဲ့အခါ၊ နနျးတျော အနောကျတံခါးကနေ ထှကျရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ အိပျတဲ့အခါ အနောကျအရပျကို လုံးဝ ခေါငျးပွုလို့မရပါဘူး။
မွနျမာလူမြိုးတှဟော အရှဘေ့ကျနဲ့ တောငျဘကျကို ခေါငျးရငျးပိုငျးလို့ ချေါပွီး၊ အနောကျဘကျနဲ့ မွောကျဘကျကို ခွရေငျးပိုငျးလို့ ချေါကွတယျ။
အိမျမှာ လူကွီးပိုငျးတှက ခေါငျးရငျးမှာ နရေပွီး၊ လူငယျပိုငျးတှကေ ခွရေငျးမှာ နကွေရပါတယျ။
老师 lǎoshī နဲ့ 师傅 shīfu ဘယ်လို ခွဲသုံးလဲ။
4:36 AM C-Word , Chinese
တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ကြည့်ဖူးကြသူတိုင်း 师傅 shīfu ရှီးhဖုf နဲ့ မစိမ်းပါဘူး။
သေသေချာချာ မသိတဲ့သူ တော်တော်များများက "ဆရာ" ကို 师傅 shīfu ရှီးhဖုf လို့ ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်ပါ။
(n) 老师 lǎoshī ဆရာ
★ ဒီအသုံးအနှုန်းက စာသင်ကြားတဲ့သူ "ကျောင်းဆရာ" ကို ခေါ်တာပါ။
Tā shì wǒmen de Hànyǔ lǎoshī.
သူက ငါတို့ရဲ့ တရုတ်ဆရာပါ။
☞ ဒီဝါကျထဲမှာ သုံးထားတာက မိမိကို စာသင်ပေးတဲ့ ဆရာကို နှုတ်ဆက်တာပါ။
(n) 师傅 shīfu ဆရာ။ ဆရာတော်
★ ဒီအသုံးအနှုန်းက သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် တစ်ခုခုမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကို ခေါ်တာပါ။
Shīfu, nǐ kāi de tài kuài le!
ဆရာကြီး၊ ခင်ဗျား (ကား)မောင်းတာ သိပ်မြန်တာပဲ။
☞ ဒီဝါကျထဲမှာ သုံးထားတာက ဒရိုင်ဘာကို ကားမောင်းတာ အရမ်း ကျွမ်းကျင်ကြောင်း ချီးကျူးပြောဆိုတာပါ။
★ နောက်ပြီးတော့ လူစိမ်းအမျိုးသားတစ်ဦးဦးကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ခေါ်ဝေါ်တဲ့အခါမှာလည်း သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
Shīfu, qǐng wèn chāoshì zěnm zǒu?
ဆရာ၊ တဆိတ်လောက်၊ စူပါမားကက် ဘယ်လိုသွားရလဲ။
☞ ဒီဝါကျထဲမှာ သုံးထားတာက မိမိနဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ လူစိမ်းအမျိုးသားတစ်ဦးကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ခေါ်ဝေါ်လိုက်တာပါ။
★ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို 师傅 shīfu လို့ ခေါ်တဲ့အခါ "ဆရာတော်" လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဝူခုန်းဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ကြားဖူးကြမှာပါ။
Shīfu, qiánmiàn yǒu yāoguài.
ဆရာတော်၊ ရှေ့မှာ မိစ္ဆာရှိတယ်။
★ သိုင်းပညာတဖက်ကမ်းခတ်တဲ့ သိုင်းဆရာကြီးတွေကိုလည်း တပည့်တွေက 师傅 shīfu လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။
★ စာရေးတဲ့အခါမှာ 师傅 shīfu သို့မဟုတ် 师父 shīfu နှစ်မျိုးလုံးကို သုံးပါတယ်။ 傅 နဲ့ 父 က အသံထွက် တူနေတာပါ။
✔ မှတ်သားထားသင့်သော ဝေါဟာရ
(n) 师母 shī mǔ ဆရာကတော်
老师 lǎoshī နဲ့ 师傅 shīfu ဘယျလို ခှဲသုံးလဲ။
တရုတျဇာတျလမျးတှဲတှေ ကွညျ့ဖူးကွသူတိုငျး 师傅 shīfu ရှီးhဖုf နဲ့ မစိမျးပါဘူး။
သသေခြောခြာ မသိတဲ့သူ တျောတျောမြားမြားက "ဆရာ" ကို 师傅 shīfu ရှီးhဖုf လို့ ချေါတတျကွပါတယျ။ အောကျမှာ လလေ့ာကွညျ့ပါ။
★ ဒီအသုံးအနှုနျးက စာသငျကွားတဲ့သူ "ကြောငျးဆရာ" ကို ချေါတာပါ။
သူက ငါတို့ရဲ့ တရုတျဆရာပါ။
☞ ဒီဝါကထြဲမှာ သုံးထားတာက မိမိကို စာသငျပေးတဲ့ ဆရာကို နှုတျဆကျတာပါ။
(n) 师傅 shīfu ဆရာ။ ဆရာတျော
★ ဒီအသုံးအနှုနျးက သကျဆိုငျရာ လုပျငနျးနယျပယျ တဈခုခုမှာ ကြှမျးကငျြတဲ့သူတှကေို ချေါတာပါ။
ဆရာကွီး၊ ခငျဗြား (ကား)မောငျးတာ သိပျမွနျတာပဲ။
☞ ဒီဝါကထြဲမှာ သုံးထားတာက ဒရိုငျဘာကို ကားမောငျးတာ အရမျး ကြှမျးကငျြကွောငျး ခြီးကြူးပွောဆိုတာပါ။
★ နောကျပွီးတော့ လူစိမျးအမြိုးသားတဈဦးဦးကို ယဉျယဉျကြေးကြေး ချေါဝျေါတဲ့အခါမှာလညျး သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
ဆရာ၊ တဆိတျလောကျ၊ စူပါမားကကျ ဘယျလိုသှားရလဲ။
☞ ဒီဝါကထြဲမှာ သုံးထားတာက မိမိနဲ့ မရငျးနှီးတဲ့ လူစိမျးအမြိုးသားတဈဦးကို ယဉျယဉျကြေးကြေး ချေါဝျေါလိုကျတာပါ။
★ ဘုနျးတျောကွီးတှကေို 师傅 shīfu လို့ ချေါတဲ့အခါ "ဆရာတျော" လို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ ဝူခုနျးဇာတျလမျးတှဲမှာ ကွားဖူးကွမှာပါ။
ဆရာတျော၊ ရှမှေ့ာ မိစ်ဆာရှိတယျ။
★ သိုငျးပညာတဖကျကမျးခတျတဲ့ သိုငျးဆရာကွီးတှကေိုလညျး တပညျ့တှကေ 师傅 shīfu လို့ပဲ ချေါပါတယျ။
★ စာရေးတဲ့အခါမှာ 师傅 shīfu သို့မဟုတျ 师父 shīfu နှဈမြိုးလုံးကို သုံးပါတယျ။ 傅 နဲ့ 父 က အသံထှကျ တူနတောပါ။
✔ မှတျသားထားသငျ့သော ဝေါဟာရ
(n) 师母 shī mǔ ဆရာကတျော
见红了 jiàn hóng le ဆိုတာ ဘာပြောတာလဲ။
4:18 AM C-Word , Chinese
ဒီအသုံးအနှုန်းက တစ်သက်တာမှာ တစ်ခါသာ ပြောခွင့်ရတဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဆိုရင် သင် အံ့သြသွားမလား။
(v) 见 jiàn တွေ့မြင်သည်
(adj) 红 hóng နီရဲသော
(part) 了 le ခဲ့တယ်။ ပြီးပြီ
(ph) 见红了 jiàn hóng le
☞ ရှင်းလင်းချက် ☜
မင်္ဂလာဦးညမှာ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး အတူအိပ်တဲ့ အိပ်ရာကို အိပ်ရာခင်းအဖြူရောင် ခင်းထားရပါတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ အိပ်ရာခင်းပေါ်မှာ (သွေးစွန်းနေတာ) အနီရောင်ကိုတွေ့ရင် သတို့သမီးဟာ အပျိုအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်တာပါ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ 见红了 jiàn hóng le 'အပျိူစစ်တယ်' လို့ သုံးပါတယ်။
ရှေးယခင်ကတော့ သမီးရှင်တွေက အရွယ်ရောက်လာတဲ့ သမီးလေးရဲ့ အိပ်ရာခင်းပေါ်မှာ (သွေးစွန်းနေတာ) အနီရောင်ကို တွေ့ခြင်းဖြင့် သမီးလေး အပျိုဖော်ဝင်ပြီဆိုတာကို သတိပြုမိကြတာပါ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးကိုလည်း 见红了 jiàn hóng le 'အပျိုဖော်ဝင်ပြီ' လို့ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
见红了 jiàn hóng le ဆိုတာ ဘာပွောတာလဲ။
ဒီအသုံးအနှုနျးက တဈသကျတာမှာ တဈခါသာ ပွောခှငျ့ရတဲ့ အသုံးအနှုနျးတဈခုဆိုရငျ သငျ အံ့သွသှားမလား။
(v) 见 jiàn တှမွေ့ငျသညျ
(adj) 红 hóng နီရဲသော
(part) 了 le ခဲ့တယျ။ ပွီးပွီ
☞ ရှငျးလငျးခကျြ ☜
မင်ျဂလာဦးညမှာ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး အတူအိပျတဲ့ အိပျရာကို အိပျရာခငျးအဖွူရောငျ ခငျးထားရပါတယျ။ မနကျပိုငျးမှာ အိပျရာခငျးပျေါမှာ (သှေးစှနျးနတော) အနီရောငျကိုတှရေ့ငျ သတို့သမီးဟာ အပြိုအစဈဖွဈကွောငျး သကျသပွေနိုငျတယျလို့ သတျမှတျတာပါ။ ဒီလို အခွအေနမြေိုးမှာ 见红了 jiàn hóng le 'အပြိူစဈတယျ' လို့ သုံးပါတယျ။
ရှေးယခငျကတော့ သမီးရှငျတှကေ အရှယျရောကျလာတဲ့ သမီးလေးရဲ့ အိပျရာခငျးပျေါမှာ (သှေးစှနျးနတော) အနီရောငျကို တှခွေ့ငျးဖွငျ့ သမီးလေး အပြိုဖျောဝငျပွီဆိုတာကို သတိပွုမိကွတာပါ။ ဒီလို အခွအေနမြေိုးကိုလညျး 见红了 jiàn hóng le 'အပြိုဖျောဝငျပွီ' လို့ သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
'အောင်မြေ' ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
11:55 PM C-Word , Chinese
ရွှေတိဂုံစေတီကို ရောက်ရင် အောင်မြေမှာ ဘုရားရှိခိုး၊ ပုတီးစိပ်လေ့ရှိပါတယ်။
(adj) 圣 shèng အထွတ်အမြတ်
(n) 地 dì မြေကြီး
(n) 圣地 shèng dì
Shèngdì zài Dàjīntǎ běimén fùjìn.
အောင်မြေက ရွှေတိဂုံ မြောက်ဘက်မုခ်အနီးမှာ ရှိတယ်။
(v) 朝拜 cháo bài
(v) 数念珠 shǔ niàn zhū
(n) 佛像 fó xiàng
(n) 卧佛 wò fó
(n) 立佛 lì fó
(n) 坐佛 zuò fó
(n) 佛教 fó jiào
(n) 寺庙 sì miào
'အောငျမွေ' ကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
ရှတေိဂုံစတေီကို ရောကျရငျ အောငျမွမှော ဘုရားရှိခိုး၊ ပုတီးစိပျလရှေိ့ပါတယျ။
(adj) 圣 shèng အထှတျအမွတျ
(n) 地 dì မွကွေီး
အောငျမွကေ ရှတေိဂုံ မွောကျဘကျမုချအနီးမှာ ရှိတယျ။
'လည်ကတုံး ရှပ်အင်္ကျီ' ကို တရုတ်လို ပြောကြည့်မယ်။
11:44 PM C-Word , Chinese
လည်ကတုံး ရှပ်အင်္ကျီက မြန်မာလူမျိုးတွေ ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံတစ်မျိုးပါ။
(v) 立 lì ထောင်ထားသည်။ ရပ်သည်
(n) 领 lǐng ကော်လာ
(n) 衬衫 chèn shān ရှပ်အင်္ကျီ
(n) 立领衬衫 lì lǐng chèn shān
Wǒ yǒu liǎng jiàn lì lǐng chènshān.
ငါ့မှာ လည်ကတုံးနှစ်ထည် ရှိတယ်။
(n) 纱笼 shā lóng
(v-o) 穿纱笼 chuān shā lóng
'လညျကတုံး ရှပျအကငြ်္ီ' ကို တရုတျလို ပွောကွညျ့မယျ။
လညျကတုံး ရှပျအကငြ်္ီက မွနျမာလူမြိုးတှေ ဝတျဆငျလရှေိ့တဲ့ ရိုးရာဝတျစုံတဈမြိုးပါ။
(v) 立 lì ထောငျထားသညျ။ ရပျသညျ
(n) 领 lǐng ကျောလာ
(n) 衬衫 chèn shān ရှပျအကငြ်္ီ
ငါ့မှာ လညျကတုံးနှဈထညျ ရှိတယျ။
ထမီ - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
9:39 PM C-Text , Chinese
မြန်မာမိန်းကလေးတွေက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ ထမီဝတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
(n) 筒裙 tǒngqún ထမီ
☞ သိထားသင့်သော ဗဟုသုတ ☜
Zài Miǎndiàn, nǚzi chuān de tǒngqún (miǎnyǔ chēng "tèmǐn") bèi shì wéi bù jíxiáng zhī wù, bù yǔnxǔ liàngshài zài chāoguò réntóu de dìfāng.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ၊ မိန်းကလေးတွေဝတ်တဲ့ လုံချည် ( မြန်မာအခေါ် 'ထမီ') ကို နိမ့်ကျတဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြတယ်၊ လူသွားလူလာရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ မလှန်းရဘူး။
Yīncǐ nánzi jìhuì zài liàng zhe yīfu de shéngsuǒ huò gǎnzi xià chuānxíng.
ဒါကြောင့်မို့ ယောင်္ကျားလေးတွေက အဝတ်အစား(ထမီ) လှန်းထားတဲ့ ကြိုးတန်း ဒါမှမဟုတ် ဝါးလုံးတန်းတွေအောက်က ဖြတ်မသွားရဘူး။
Rú nánzi chuānxíng, zé nánzi shēnshang de "shénlì" huì diūshī, bìng huì dǎoméi yíbèizi.
တကယ်လို့ ဖြတ်သွားမိရင်တော့၊ ယောင်္ကျားလေးရဲ့ ဘုန်းကံတွေ နိမ့်သွားပြီး၊ ဘဝတလျှောက်လုံး ကံနိမ့်ကျတတ်တယ်။
Gùcǐ, dào fótǎ sìmiào cháobài de xìnnǚ, bù děi pāndēng tǎzuò, zhǐ guì zài tǎxià zhānbài xǔyuàn,
ဒါကြောင့်မို့၊ ဘုရားကျောင်းကန်တွေကို ဘုရားဖူးလာကြတဲ့ ဒကာမတွေဟာလည်း စေတီတော်ပေါ်ကို တက်လို့မရဘူး၊ စေတီတော်ခြေရင်းကပဲ ဒူးတုပ်ပြီး ဖူးမြော်ကန်တော့၊ ဆုတောင်းကြရတယ်။
rú yào xiàng fótǎ, púsà shēnshang tiējīn, xū jiāo yóu nánzi dàibàn.
တကယ်လို့ စေတီတော် ဒါမှမဟုတ် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေရဲ့ ကိုယ်လုံးတော်ပေါ်မှာ ရွှေပြားကပ်လှူချင်ရင်၊ သူတို့ကိုယ်စား ယောင်္ကျားလေးတွေကို အကူအညီတောင်းပြီး ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ထမီ - တရုတျလို ဘယျလိုချေါသလဲ။
မွနျမာမိနျးကလေးတှကေ ရိုးရာယဉျကြေးမှုအရ ထမီဝတျလရှေိ့ကွပါတယျ။
☞ သိထားသငျ့သော ဗဟုသုတ ☜
မွနျမာနိုငျငံမှာ၊ မိနျးကလေးတှဝေတျတဲ့ လုံခညျြ (မွနျမာအချေါ 'ထမီ') ကို နိမျ့ကတြဲ့ အရာတဈခုအဖွဈ သတျမှတျထားကွတယျ၊ လူသှားလူလာရှိတဲ့ နရောတှမှော မလှနျးရဘူး။
ဒါကွောငျ့မို့ ယောကငြ်္ားလေးတှကေ အဝတျအစား(ထမီ) လှနျးထားတဲ့ ကွိုးတနျး ဒါမှမဟုတျ ဝါးလုံးတနျးတှအေောကျက ဖွတျမသှားရဘူး။
တကယျလို့ ဖွတျသှားမိရငျတော့၊ ယောကငြ်္ားလေးရဲ့ ဘုနျးကံတှေ နိမျ့သှားပွီး၊ ဘဝတလြှောကျလုံး ကံနိမျ့ကတြတျတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့၊ ဘုရားကြောငျးကနျတှကေို ဘုရားဖူးလာကွတဲ့ ဒကာမတှဟောလညျး စတေီတျောပျေါကို တကျလို့မရဘူး၊ စတေီတျောခွရေငျးကပဲ ဒူးတုပျပွီး ဖူးမွျောကနျတော့၊ ဆုတောငျးကွရတယျ။
တကယျလို့ စတေီတျော ဒါမှမဟုတျ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောတှရေဲ့ ကိုယျလုံးတျောပျေါမှာ ရှပွေားကပျလှူခငျြရငျ၊ သူတို့ကိုယျစား ယောကငြ်္ားလေးတှကေို အကူအညီတောငျးပွီး ပွုလုပျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ထမီ - ထဘီ - ထမိန် - ထမီ - ထဘီ - ထမိနျ
6:31 PM C-Word , Chinese
တရုတ်ဘာသာရှိ မသိမဖြစ် ကြိယာများ ရေးသားနည်းတွေကို ပို့ချသွားမှာပါ။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ (၁၀) လုံး လေ့ကျင့်ပါမယ်။
[ ချွိ ] သွားသည်
[ လိုင် ] လာသည်
[ ကျင့် ] ဝင်သည်
[ ချူးh ] ထွက်သည်
[ ရှန့်h(င်) ] တက်သည်
[ ရှာ့ ] ဆင်းသည်
[ မိုင် ] ဝယ်သည်
[ မိုက် ] ရောင်းသည်
[ ချီးh ] စားသည်
[ ဟဲယ်း ] သောက်သည်
စုတ်ချက်ဆွဲနည်း အဆင့်ဆင့်နှင့် အသံထွက် မှန်ကန်စေရန် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ပြီး လေ့လာပါ။
တရုတျဘာသာရှိ မသိမဖွဈ ကွိယာမြား ရေးသားနညျးတှကေို ပို့ခသြှားမှာပါ။ ဒီသငျခနျးစာမှာ (၁၀) လုံး လကေ့ငျြ့ပါမယျ။
[ ခြှိ ] သှားသညျ
[ လိုငျ ] လာသညျ
[ ကငျြ့ ] ဝငျသညျ
[ ခြူးh ] ထှကျသညျ
[ ရှနျ့h(ငျ) ] တကျသညျ
[ ရှာ့ ] ဆငျးသညျ
[ မိုငျ ] ဝယျသညျ
[ မိုကျ ] ရောငျးသညျ
[ ခြီးh ] စားသညျ
[ ဟဲယျး ] သောကျသညျ
စုတျခကျြဆှဲနညျး အဆငျ့ဆငျ့နှငျ့ အသံထှကျ မှနျကနျစရေနျ ဗီဒီယိုဖိုငျကို ကွညျ့ပွီး လလေ့ာပါ။
公主 gōng zhǔ ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
4:31 PM C-Word , Chinese
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ရှေးခေတ်တုန်းက ဘုရင့်သမီးတော် (အိမ်ရှေ့မင်းသမီး) ကို ခေါ်တာပါ။
(n) 公主 gōng zhǔ
Wǒ xiǎng biànchéng yí ge hěn piàoliang de gōngzhǔ měinǚ.
ကျွန်မက အရမ်းလှပတဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်ပါးလို ပြောင်းလဲလိုက်ချင်တယ်။
(n) 长公主 zhǎng gōng zhǔ
ဘုရင်၏ အစ်မတော် သို့မဟုတ် နှမတော်
ဘုရင်တစ်ပါးမှာ သားတော်နဲ့ သမီးတော် ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီ သမီးတော်က 公主 gōngzhǔ ပဲပေါ့။ ဘုရင်နတ်ရွာစံသွားရင် သားတော် အိမ်ရှေ့မင်းသားက နန်းတက်ရပါတယ်။ နန်းတက်ပြီးနောက် သူ့မှာ သမီးတော် ဖွားမြင်လာရင် အဲဒီသမီးတော်ကို 公主 gōngzhǔ လို့ ခေါ်ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူ ဘုရင်မဖြစ်ခင်က သူ့အစ်မတော် သို့မဟုတ် နှမတော်က 公主 gōngzhǔ နော်။ သူ ဘုရင်ဖြစ်တော့ သူ့သမီးတော်က 公主 gōngzhǔ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အစ်မတော် သို့မဟုတ် နှမတော်ကို လေးစားသမှုနဲ့ 长公主 zhǎng gōngzhǔလို့ ခေါ်တာပါ။
(n) 大长公主 dà zhǎng gōng zhǔ
ဘုရင့်အဒေါ်ဆိုတာလည်း လက်ရှိဘုရင့် ဘိုးတော်ဘုရင်ရဲ့ သမီးတော်တစ်ပါးပါပဲ။ အဲဒီတော့ သူလည်း တချိန်က 公主 gōngzhǔ ပေါ့။ အခုအချိန်မှာတော့ သူမကို လေးစားသမှုနဲ့ 大长公主 dà zhǎng gōngzhǔ လို့ ခေါ်တာပါ။
(n) 公子 gōng zǐ
KTV က မိန်းကလေး
KTV လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို အဖော်လုပ်ပြီး သီချင်းဆို၊ အရက်ငှဲ့၊ စီးကရက်မီးညှိပေးတဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုလည်း 公主 gōngzhǔ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ခေါ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းပေါ့။
公主 gōng zhǔ ဆိုတာ ဘာအဓိပ်ပာယျလဲ။
ယဘေုယအြားဖွငျ့တော့ ရှေးခတျေတုနျးက ဘုရငျ့သမီးတျော (အိမျရှမေ့ငျးသမီး) ကို ချေါတာပါ။
ကြှနျမက အရမျးလှပတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးတဈပါးလို ပွောငျးလဲလိုကျခငျြတယျ။
ဘုရငျ၏ အဈမတျော သို့မဟုတျ နှမတျော
ဘုရငျတဈပါးမှာ သားတျောနဲ့ သမီးတျော ရှိတယျဆိုပါစို့။ အဲဒီ သမီးတျောက 公主 gōngzhǔ ပဲပေါ့။ ဘုရငျနတျရှာစံသှားရငျ သားတျော အိမျရှမေ့ငျးသားက နနျးတကျရပါတယျ။ နနျးတကျပွီးနောကျ သူ့မှာ သမီးတျော ဖှားမွငျလာရငျ အဲဒီသမီးတျောကို 公主 gōngzhǔ လို့ ချေါရပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ သူ ဘုရငျမဖွဈခငျက သူ့အဈမတျော သို့မဟုတျ နှမတျောက 公主 gōngzhǔ နျော။ သူ ဘုရငျဖွဈတော့ သူ့သမီးတျောက 公主 gōngzhǔ ဖွဈသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့အဈမတျော သို့မဟုတျ နှမတျောကို လေးစားသမှုနဲ့ 长公主 zhǎng gōngzhǔလို့ ချေါတာပါ။
ဘုရငျ့အဒျေါဆိုတာလညျး လကျရှိဘုရငျ့ ဘိုးတျောဘုရငျရဲ့ သမီးတျောတဈပါးပါပဲ။ အဲဒီတော့ သူလညျး တခြိနျက 公主 gōngzhǔ ပေါ့။ အခုအခြိနျမှာတော့ သူမကို လေးစားသမှုနဲ့ 大长公主 dà zhǎng gōngzhǔ လို့ ချေါတာပါ။
KTV က မိနျးကလေး
KTV လာတဲ့ ဧညျ့သညျတှကေို အဖျောလုပျပွီး သီခငျြးဆို၊ အရကျငှဲ့၊ စီးကရကျမီးညှိပေးတဲ့ ကောငျမလေးတှကေိုလညျး 公主 gōngzhǔ လို့ ချေါပါတယျ။ ဒါကတော့ ဒီဘကျခတျေမှာ ချေါတဲ့ အသုံးအနှုနျးပေါ့။
'ပသျှူးး ထမင်းကြော်' ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
4:26 PM C-Word , Chinese
တရုတ်ဆိုင်မှာ မှာစားတဲ့အခါ ပြောတတ်အောင် ဒီဝေါဟာရလေးကို မှတ်ထားပါ။
(adj) 酸 suān ချဉ်သော
(adj) 辣 là စပ်သော
(v) 炒 chǎo ကြော်သည်
(n) 饭 fàn ထမင်း
(n) 酸辣炒饭 suān là chǎo fàn
Lái yì pán suānlà chǎofàn.
(n) 炒饭 chǎo fàn
(n) 炒面 chǎo miàn
(n) 炒米粉 chǎo mǐ fěn
(v) 点菜 diǎn cài
'ပသြှူးး ထမငျးကွျော' ကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
တရုတျဆိုငျမှာ မှာစားတဲ့အခါ ပွောတတျအောငျ ဒီဝေါဟာရလေးကို မှတျထားပါ။
(adj) 酸 suān ခဉျြသော
(adj) 辣 là စပျသော
(v) 炒 chǎo ကွျောသညျ
(n) 饭 fàn ထမငျး
'တုံယမ်း' ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
4:21 PM C-Word , Chinese
ချဉ်စပ်အရသာရှိပြီး ခံတွင်းတွေ့စေတာမို့ လူတိုင်းနီးပါး တုံယမ်းကို ကြိုက်ကြပါတယ်။
(n) 东 dōng အရှေ့
(n) 炎 yán ပူအိုက်သည်
(n) 东炎 dōng yán တုံယမ်း
Wǒ hěn xǐhuan dōngyán hǎixiān miàn.
တုံယမ်း ပင်လယ်စာခေါက်ဆွဲကို ငါ အရမ်း ကြိုက်တယ်။
(adj) 甜 tián ချိုသော
(adj) 咸 xián ငန်သော
(adj) 涩 sè ဖန်သော
(adj) 苦 kǔ ခါးသော
'တုံယမျး' ကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောမလဲ။
ခဉျြစပျအရသာရှိပွီး ခံတှငျးတှစေ့တောမို့ လူတိုငျးနီးပါး တုံယမျးကို ကွိုကျကွပါတယျ။
(n) 东 dōng အရှေ့
(n) 炎 yán ပူအိုကျသညျ
(n) 东炎 dōng yán တုံယမျး
တုံယမျး ပငျလယျစာခေါကျဆှဲကို ငါ အရမျး ကွိုကျတယျ။
(adj) 甜 tián ခြိုသော
(adj) 咸 xián ငနျသော
(adj) 涩 sè ဖနျသော
(adj) 苦 kǔ ခါးသော
ထမင်း စားပြီးပြီလား - တရုတ်လို မေးမယ်။
5:22 PM C-Sentence , Chinese
ဒီမေးခွန်းကို တရုတ်လိုမေးတဲ့ပုံစံ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Chī fàn hǎo le ma?
Chī hǎo le ma?
Chī wán le ma?
Chī guo le ma?
Chī liǎo ma?
Chī fàn le méi yǒu?
ထမငျး စားပွီးပွီလား - တရုတျလို မေးမယျ။
ဒီမေးခှနျးကို တရုတျလိုမေးတဲ့ပုံစံ အမြိုးမြိုး ရှိပါတယျ။ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
CCTV ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
5:17 PM C-Word , Chinese
မီးနီဖြတ်တဲ့ကားတွေကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင် လမ်းခွဆုံတွေမှာ CCTV တပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
(n) 电子 diàn zǐ အီလစ်ထရွန်းနစ်
(n) 警察 jǐng chá ရဲ
(n) 电子警察 diànzǐ jǐngchá CCTV
Ãnzhuāng yí tào diànzǐ jǐngchá yào duōshao qián?
CCTV တစ်စုံ တပ်ရင် ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
CCTV ကို ဒီလိုလည်း ခေါ်ပါသေးတယ်။
(n) 电子眼 diàn zǐ yǎn CCTV
CCTV ကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
မီးနီဖွတျတဲ့ကားတှကေို မှတျတမျးတငျနိုငျအောငျ လမျးခှဆုံတှမှော CCTV တပျထားလရှေိ့ပါတယျ။
(n) 电子 diàn zǐ အီလဈထရှနျးနဈ
CCTV တဈစုံ တပျရငျ ဘယျလောကျကမြလဲ။
CCTV ကို ဒီလိုလညျး ချေါပါသေးတယျ။
'ပါဌ်ဆင့်စာလုံး' ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
5:14 PM C-Word , Chinese
မြန်မာဘာသာမှာ စာရေးသားရင် ပါဠိစာလုံး၊ ပါဌ်ဆင့်စာလုံးတွေက ရေးရခက်ပါတယ်။
(n) 缅文 miǎn wén မြန်မာဘာသာ။ မြန်မာစာ
(v) 迭 dié အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန်
(n) 字 zì စာလုံး
miǎnwén dié zì
Miǎnwén dié zì hǎo nán jì!
မြန်မာစာ ပါဌ်ဆင့်စာလုံးတွေက မှတ်ရခက်လိုက်တာ။
(n) 巴利文 bā lì wén ပါဠိဘာသာ
(n) 梵文 fàn wén သက္ကတဘာသာ
'ပါဌျဆငျ့စာလုံး' ကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
မွနျမာဘာသာမှာ စာရေးသားရငျ ပါဠိစာလုံး၊ ပါဌျဆငျ့စာလုံးတှကေ ရေးရခကျပါတယျ။
(n) 缅文 miǎn wén မွနျမာဘာသာ။ မွနျမာစာ
(v) 迭 dié အကွိမျကွိမျအဖနျဖနျ
(n) 字 zì စာလုံး
မွနျမာစာ ပါဌျဆငျ့စာလုံးတှကေ မှတျရခကျလိုကျတာ။
(n) 梵文 fàn wén သက်ကတဘာသာ
'ဟင့်အင်း' လို့ ငြင်းရင် တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
5:10 PM C-Word , Chinese
မိမိ မကြိုက်တာ၊ သဘောမကျတာတွေကို စကားလုံး တစ်လုံးတည်းနဲ့ ငြင်းရင် 'ဟင့်အင်း' လို့ ပြောပါတယ်။
1. 不 bù ဟင့်အင်း (မ...ပါ။ မ...ဘူး)
ဒီအသုံးအနှုန်းက ပစ္စုပ္ပာန်နဲ့ အနာဂတ်ပြ မေးခွန်းတွေကို ဟင့်အင်းလို့ ငြင်းရင် သုံးပါတယ်။
Nǐ xiànzài qù yóuyǒng ma?
မင်း အခု ရေသွားကူးမလား။
2. 没有 méi yǒu (မ...ခဲ့ပါဘူး)
ဒီအသုံးအနှုန်းက အတိတ်ကာလပြ မေးခွန်းတွေကို ဟင့်အင်းလို့ ငြင်းရင် သုံးပါတယ်။
Nǐ zuótiān shàng kè ma?
မင်း မနေ့က အတန်းတက်လား။
3. 还没有 hái méi yǒu (မ...ရသေးဘူး)
မင်း ထမင်း စားပြီးပြီလား။
'ဟငျ့အငျး' လို့ ငွငျးရငျ တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
မိမိ မကွိုကျတာ၊ သဘောမကတြာတှကေို စကားလုံး တဈလုံးတညျးနဲ့ ငွငျးရငျ 'ဟငျ့အငျး' လို့ ပွောပါတယျ။
1. 不 bù ဟငျ့အငျး (မ...ပါ။ မ...ဘူး)
ဒီအသုံးအနှုနျးက ပစ်စုပ်ပာနျနဲ့ အနာဂတျပွ မေးခှနျးတှကေို ဟငျ့အငျးလို့ ငွငျးရငျ သုံးပါတယျ။
မငျး အခု ရသှေားကူးမလား။
ဒီအသုံးအနှုနျးက အတိတျကာလပွ မေးခှနျးတှကေို ဟငျ့အငျးလို့ ငွငျးရငျ သုံးပါတယျ။
မငျး မနကေ့ အတနျးတကျလား။
3. 还没有 hái méi yǒu (မ...ရသေးဘူး)
မငျး ထမငျး စားပွီးပွီလား။
正月 zhēng yuè ဆိုတာ ဘာလလဲ။
4:02 PM C-Word , Chinese
တရုတ်စကား လေ့လာသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုပါ။
正月 zhēng yuè ဆိုတာက တရုတ်ပြက္ခဒိန်(农历 nóng lì) တစ်လပိုင်းကို ခေါ်တာပါ။
နှစ်လပိုင်းကနေ ဆယ်လပိုင်းအထိ သီခြားအခေါ်အဝေါ် မရှိပါ။
ဒါပေမယ့် ဆယ့်တစ်လပိုင်းကိုတော့ 冬月 dōng yuè လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဆယ့်နှစ်လပိုင်းကိုတော့ 腊月 là yuè လို့ခေါ်ပါတယ်။
Làyuè sānshí shì Zhōngguó de chúxī.
(တရုတ်ပြက္ခဒိန်) ၁၂ လပိုင်း ၃၀ ရက်ဟာ တရုတ်နှစ်ကူး အကြိုည ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတျစကား လလေ့ာသူတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ ဝေါဟာရတဈခုပါ။
正月 zhēng yuè ဆိုတာက တရုတျပွက်ခဒိနျ(农历 nóng lì) တဈလပိုငျးကို ချေါတာပါ။
နှဈလပိုငျးကနေ ဆယျလပိုငျးအထိ သီခွားအချေါအဝျေါ မရှိပါ။
ဒါပမေယျ့ ဆယျ့တဈလပိုငျးကိုတော့ 冬月 dōng yuè လို့ချေါပါတယျ။
ဆယျ့နှဈလပိုငျးကိုတော့ 腊月 là yuè လို့ချေါပါတယျ။
(တရုတျပွက်ခဒိနျ) ၁၂ လပိုငျး ၃၀ ရကျဟာ တရုတျနှဈကူး အကွိုည ဖွဈပါတယျ။
'မွေးနေ့ရှင်' ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
3:58 PM C-Word , Chinese
တချို့က မိမိမွေးနေ့ရောက်ရင် မိသားစုဝင်တွေ ဒါမှမဟုတ် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။
(n) 寿星 shòu xīng မွေးနေ့ရှင်
Zhù shí èr yuè fèn de shòuxīng, shēngrì kuàilè!
ဒီဇင်ဘာလမှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ရှင်များအားလုံး၊ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
(n) 生日 shēng rì
(n) 寿面 shòu miàn
(n) 生日歌 shēng rì gē
(n) 生日卡 shēng rì kǎ
(n) 生日蜡烛 shēng rì là zhú
(n) 生日礼物 shēng rì lǐ wù
(n) 生日会 shēng rì huì
(n) 生日派对 shēng rì pài duì
(n) 生日晚会 shēng rì wǎn huì
(n) 生日宴会 shēng rì yàn huì
'မှေးနရှေ့ငျ' ကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
တခြို့က မိမိမှေးနရေ့ောကျရငျ မိသားစုဝငျတှေ ဒါမှမဟုတျ မိတျဆှတှေနေဲ့ မှေးနပှေဲ့ကငျြးပလရှေိ့ပါတယျ။
(n) 寿星 shòu xīng မှေးနရှေ့ငျ
ဒီဇငျဘာလမှာ ကရြောကျတဲ့ မှေးနရှေ့ငျမြားအားလုံး၊ မှေးနမှေ့ာ ပြျောရှငျကွပါစေ။
3:53 PM C-Word , Chinese
မိန်းကလေးသဘာဝအရ တစ်လတစ်ခါ ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
(n) 月经 yuè jīng ရာသီသွေး
(v) 来月经 lái yuè jīng ဓမ္မတာ လာသည်
ဒါပေမယ့် စကားပြောတဲ့အခါ ဒီလိုပြောလေ့ရှိပါတယ်။
Wǒ lái dà yí mā.
Wǒ dǎoméi le.
Zhè ge yuè dà yí mā méi lái.
ဒီလ ဟိုဟာ မလာဘူး။
(ph) 大姨妈 dà yí mā
(n) 姨妈巾 yí mā jīn
(n) 月经带 yuè jīng dài
(n) 月经布 yuè jīng bù
(n) 月布 yuè bù
မိနျးကလေးသဘာဝအရ တဈလတဈခါ ဓမ်မတာလာတဲ့အခါ တရုတျလို ဘယျလိုပွောမလဲ။
(n) 月经 yuè jīng ရာသီသှေး
(v) 来月经 lái yuè jīng ဓမ်မတာ လာသညျ
ဒါပမေယျ့ စကားပွောတဲ့အခါ ဒီလိုပွောလရှေိ့ပါတယျ။
3:38 PM C-Word , Chinese
အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်စတဲ့ အရပ်မျက်နှာတွေကို တရုတ်လို လေ့လာကြပါစို့။
အရှေ့ [ တုံး(င်) ]
အနောက် [ ရှီး ]
မြောက် [ ပေ ]
တောင် [ နန် ]
စုတ်ချက်ဆွဲနည်း အဆင့်ဆင့်နှင့် အသံထွက်မှန်ကန်စေရန် ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့် လေ့လာပါ။
အရှေ့၊ အနောကျ၊ တောငျ၊ မွောကျစတဲ့ အရပျမကျြနှာတှကေို တရုတျလို လလေ့ာကွပါစို့။
အရှေ့ [ တုံး(ငျ) ]
အနောကျ [ ရှီး ]
မွောကျ [ ပေ ]
တောငျ [ နနျ ]
စုတျခကျြဆှဲနညျး အဆငျ့ဆငျ့နှငျ့ အသံထှကျမှနျကနျစရေနျ ဗီဒီယိုဖိုငျဖွငျ့ လလေ့ာပါ။
3:29 PM C-Word , Chinese
သင် နေ့စဉ်စားနေသော အသားတွေကို တရုတ်လို ရေးတတ်ပါသလား။
[ ကျီး ] ကြက်
[ ယား ] ဘဲ
[ ယန်(င်) ] ဆိတ်
[ နျို ] နွား
[ ကျူးh ] ဝက်
[ ရို့r ] အသား
အသံထွက်မှန်ကန်ဖို့နဲ့ တဆင့်ချင်း ရေးနည်းတွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သငျ နစေ့ဉျစားနသေော အသားတှကေို တရုတျလို ရေးတတျပါသလား။
[ ကြီး ] ကွကျ
[ ယနျ(ငျ) ] ဆိတျ
[ နြို ] နှား
[ ကြူးh ] ဝကျ
[ ရို့r ] အသား
အသံထှကျမှနျကနျဖို့နဲ့ တဆငျ့ခငျြး ရေးနညျးတှကေို ဗီဒီယိုဖိုငျထဲမှာ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
火 huǒ ကို ဘယ်လိုရေးရသလဲ။
4:14 PM C-Draw , Chinese
火 huǒ ဆိုတဲ့ တရုတ်စာလုံးနဲ့ ဆက်စပ်ဝေါဟာရတွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပြီး လေ့လာကြပါစို့နော်။ တလက်စတည်း စာလုံးအတွဲတွေကို ခန့်မှန်းကြည့်ပါနော်။
机 jī ကို ဘယ်လိုရေးရသလဲ။
4:00 PM C-Draw , Chinese
机 jī ဆိုတဲ့ တရုတ်စာလုံးလေးကတော့ စက် လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီစာလုံးလေးရဲ့ ရေးပုံရေးနည်းတွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ လေ့လာကြည့်ပါ။
'နှစ်ညအိပ် သုံးရက်' တရုတ်လို ပြောကြည့်မယ်။
3:42 PM C-Word , Chinese
ဒီအသုံးအနှုန်းက များသောအားဖြင့် ခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ပြောလေ့ရှိတာမို့ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
(nu) 三 sān သုံး (၃)
(n/m) 天 tiān ရက်။ နေ့
(nu) 两 liǎng နှစ် (၂)
(m) 宿 xiǔ ည
sān tiān liǎng xiǔ
Wǒ zài nàr dāi le sān tiān liǎng xiǔ.
ငါ အဲဒီမှာ နှစ်ညအိပ် သုံးရက် ကြာခဲ့တယ်။
Cóng bā hào qù Púgān sān tiān liǎng xiǔ de lǚxíng.
၈-ရက်နေ့ကနေစပြီး ပုဂံကို နှစ်ညအိပ် သုံးရက် ခရီးသွားမယ်။
ဒီတရုတ်စာလုံး တစ်လုံးတည်းကိုပဲ အသံပြောင်းထွက်ပြီး တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
1. 宿 Sù မျိုးနွယ်အမည်
2. 宿 Xū မျိုးနွယ်အမည်
3. 宿 Xǔ မျိုးနွယ်အမည်
4. 宿 sù ညအိပ်ခြင်း။ မူလ
5. 宿 xiǔ ည
'နှဈညအိပျ သုံးရကျ' တရုတျလို ပွောကွညျ့မယျ။
ဒီအသုံးအနှုနျးက မြားသောအားဖွငျ့ ခရီးသှားတဲ့အခါမြိုးမှာ ပွောလရှေိ့တာမို့ လလေ့ာထားသငျ့ပါတယျ။
(nu) 三 sān သုံး (၃)
(n/m) 天 tiān ရကျ။ နေ့
(nu) 两 liǎng နှဈ (၂)
ငါ အဲဒီမှာ နှဈညအိပျ သုံးရကျ ကွာခဲ့တယျ။
၈-ရကျနကေ့နစေပွီး ပုဂံကို နှဈညအိပျ သုံးရကျ ခရီးသှားမယျ။
ဒီတရုတျစာလုံး တဈလုံးတညျးကိုပဲ အသံပွောငျးထှကျပွီး တခွားအဓိပ်ပာယျတှနေဲ့ သုံးနိုငျပါသေးတယျ။
1. 宿 Sù မြိုးနှယျအမညျ
2. 宿 Xū မြိုးနှယျအမညျ
3. 宿 Xǔ မြိုးနှယျအမညျ
4. 宿 sù ညအိပျခွငျး။ မူလ
KFC ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောရလဲ။
3:26 PM C-Word , Chinese
KFC ကြက်ကြော်ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးမှာ မသိသူမရှိပါဘူး။ တရုတ်ပြည်မှာတော့ KFC ကို တရုတ်လိုပဲခေါ်ပါတယ်။
KFC (n) 肯德基 kěn dé jī
Wǒmen qù kěndéjī chī zhájī ba.
ငါတို့ KFC သွားပြီး ကြက်ကြော်စားကြစို့။
KFC (n) 肯德基快餐 kěn dé jī kuài cān
online ပေါ်မှာတော့ တရုတ် pinyin အစစာလုံးတွေကို သုံးပြီးရေးထားတဲ့ နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုး ရှိပါသေးတယ်။
KFC (v) Kāi Fáng Cāo 开房操
အဲဒီတော့ KFC လို့ ပြောရင် ရှင်းအောင် ပြန်မေးဖို့တော့ လိုတယ်နော်။ ကိုယ်က KFC ဆိုင်ထင်ပြီး လိုလိုလားလား လိုက်သွားမိရင် ဟော်တယ်အခန်းထဲ ရောက်သွားတတ်လို့ပါ။
Tā nán péngyǒu dài tā qù kāi fáng cāo tā le.
သူ့ဘဲက သူ့ကို ဟော်တယ်ခေါ်သွားပြီး ××× လုပ်ခဲ့တယ်။
KFC ကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောရလဲ။
KFC ကွကျကွျောဆိုရငျ တကမ်ဘာလုံးမှာ မသိသူမရှိပါဘူး။ တရုတျပွညျမှာတော့ KFC ကို တရုတျလိုပဲချေါပါတယျ။
ငါတို့ KFC သှားပွီး ကွကျကွျောစားကွစို့။
online ပျေါမှာတော့ တရုတျ pinyin အစစာလုံးတှကေို သုံးပွီးရေးထားတဲ့ နောကျအဓိပ်ပာယျတဈမြိုး ရှိပါသေးတယျ။
အဲဒီတော့ KFC လို့ ပွောရငျ ရှငျးအောငျ ပွနျမေးဖို့တော့ လိုတယျနျော။ ကိုယျက KFC ဆိုငျထငျပွီး လိုလိုလားလား လိုကျသှားမိရငျ ဟျောတယျအခနျးထဲ ရောကျသှားတတျလို့ပါ။
သူ့ဘဲက သူ့ကို ဟျောတယျချေါသှားပွီး ××× လုပျခဲ့တယျ။
打飞机 dǎ fēijī ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
3:15 PM C-Word , Chinese
ဒီအသုံးအနှုန်းလေးကတော့ 18+ ပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စာလေ့လာတဲ့အနေနဲ့တော့ သိထားသင့်ပါတယ်။
(v) 打 dǎ ရိုက်သည်
(n) 飞机 fēijī လေယာဉ်
打飞机 dǎ fēijī
လိင်ကိစ္စကို တကိုယ်ရေ အာသာဖြေသည်။
Dǎ fēijī dǎ duō le yǒu méi yǒu huàichù?
မာစတာဘေးရှင်း လုပ်တာများရင် ဆိုးကျိုးရှိလား။
打手枪 dǎ shǒu qiāng
(ယောင်္ကျားလေး) မာစတာဘေးရှင်း လုပ်သည်
五打一 wǔ dǎ yī
手淫 shǒu yín
(ယောင်္ကျားလေး/မိန်းကလေး) မာစတာဘေးရှင်း လုပ်သည်
女生手淫 nǚ shēng shǒu yín
(မိန်းကလေး) မာစတာဘေးရှင်း လုပ်သည်
女生自慰 nǚ shēng zì wèi
打飞机 dǎ fēijī ဆိုတာ ဘာအဓိပ်ပာယျလဲ။
ဒီအသုံးအနှုနျးလေးကတော့ 18+ ပါ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ စာလလေ့ာတဲ့အနနေဲ့တော့ သိထားသငျ့ပါတယျ။
(v) 打 dǎ ရိုကျသညျ
(n) 飞机 fēijī လယောဉျ
လိငျကိစ်စကို တကိုယျရေ အာသာဖွသေညျ။
မာစတာဘေးရှငျး လုပျတာမြားရငျ ဆိုးကြိုးရှိလား။
(ယောကငြ်္ားလေး) မာစတာဘေးရှငျး လုပျသညျ
(ယောကငြ်္ားလေး/မိနျးကလေး) မာစတာဘေးရှငျး လုပျသညျ
(မိနျးကလေး) မာစတာဘေးရှငျး လုပျသညျ
'ပထမဝါဆိုလ' ကို တရုတ်လို ပြောချင်တယ်။
3:10 PM C-Word , Chinese
မြန်မာလတွေဟာ ဝါထပ်တဲ့နှစ်မှာ ၁၃-လ ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ပထမဝါဆိုလကို ဘယ်လိုပြောရသလဲ။
(n) 缅历 miǎn lì မြန်မာပြက္ခဒိန်
(n) 闰 rùn ဝါထပ်ခြင်း
(n) 月 yuè လ
Zhè ge yuè shì miǎnlì rùnyuè.
(ဒီလက မြန်မာပြက္ခဒိန်ထဲက ဝါထပ်တဲ့လပါ)
(n) 缅历一月 miǎnlì yī yuè
(n) 缅历二月 miǎnlì èr yuè
(n) 缅历三月 miǎnlì sān yuè
(n) 缅历闰月 miǎnlì rùn yuè
(n) 缅历四月 miǎnlì sì yuè
(n) 缅历五月 miǎnlì wǔ yuè
(n) 缅历六月 miǎnlì liù yuè
(n) 缅历七月 miǎnlì qī yuè
(n) 缅历八月 miǎnlì bā yuè
(n) 缅历九月 miǎnlì jiǔ yuè
(n) 缅历十月 miǎnlì shí yuè
(n) 缅历十一月 miǎnlì shí yī yuè
(n) 缅历十二月 miǎnlì shí èr yuè
'ပထမဝါဆိုလ' ကို တရုတျလို ပွောခငျြတယျ။
မွနျမာလတှဟော ဝါထပျတဲ့နှဈမှာ ၁၃-လ ဖွဈသှားလရှေိ့ပါတယျ။ ပထမဝါဆိုလကို ဘယျလိုပွောရသလဲ။
(n) 缅历 miǎn lì မွနျမာပွက်ခဒိနျ
(n) 闰 rùn ဝါထပျခွငျး
(ဒီလက မွနျမာပွက်ခဒိနျထဲက ဝါထပျတဲ့လပါ)
'ရာဟုသား' ကို တရုတ်လို ပြောလို့ရလား။
3:06 PM C-Word , Chinese
မိမိမွေးနေ့ကို ပုံမှန်ရက်တွေအတိုင်း ပြောချင်ရင် ပြဿနာမရှိပေမယ့် ဗေဒင်တွက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒါလေးကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
ရာဟုဆိုတာက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပါ။
(n) 星期三 xīng qī sān ဗုဒ္ဓဟူး
(n) 下午 xià wǔ ညနေ
Wǒ shì xīngqīsān xiàwǔ shēng de.
(ငါက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ မွေးတဲ့သူပါ)
'ရာဟုသား' ကို တရုတျလို ပွောလို့ရလား။
မိမိမှေးနကေို့ ပုံမှနျရကျတှအေတိုငျး ပွောခငျြရငျ ပွဿနာမရှိပမေယျ့ ဗဒေငျတှကျတဲ့အခါမှာတော့ ဒါလေးကို သိထားဖို့ လိုပါတယျ။
ရာဟုဆိုတာက ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ ညနပေါ။
(n) 星期三 xīng qī sān ဗုဒ်ဓဟူး
(n) 下午 xià wǔ ညနေ
(ငါက ဗုဒ်ဓဟူးနညေ့နေ မှေးတဲ့သူပါ)
"သောက်တာ" ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
5:06 PM C-Word , Chinese
"သောက်တယ်" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက မြန်မာလို တစ်မျိုးတည်း ရှိပေမယ့် တရုတ်စကားမှာတော့ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားသုံးပါတယ်။
(v) 喝 hē သောက်သည်။
ဒီဝေါဟာရကတော့ အရည်တွေသောက်တာမှာ သုံးပါတယ်။
Wǒ xiǎng hē shuǐ.
မင်း လက်ဘက်ရည် သောက်မလား၊ ကော်ဖီ သောက်မလား။
(v) 吸 xī သောက်သည်။ ရှူသည်။ စုပ်သည်။
ဒီဝေါဟာရကတော့ ဆေးလိပ်သောက်တာမှာ သုံးပါတယ်။
Zhè lǐ bù kěyǐ xī yān.
ဒီမှာ ဆေးလိပ်သောက်လို့ မရဘူး။
Qǐng wù xī yān.
(v) 服 fú သောက်သည်။ မှီဝဲသုံးဆောင်သည်
ဒီဝေါဟာရကတော့ ဆေးသောက်တာမှာ သုံးပါတယ်။
Yàohé shàng yǒu fú yào shuō míng.
ဆေးဗူးပေါ်မှာ ဆေးသောက်ရမယ့် အညွှန်းပါတယ်။
"သောကျတာ" ကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောမလဲ။
"သောကျတယျ" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက မွနျမာလို တဈမြိုးတညျး ရှိပမေယျ့ တရုတျစကားမှာတော့ လုပျဆောငျခကျြပျေါမူတညျပွီး ခှဲခွားသုံးပါတယျ။
(v) 喝 hē သောကျသညျ။
ဒီဝေါဟာရကတော့ အရညျတှသေောကျတာမှာ သုံးပါတယျ။
မငျး လကျဘကျရညျ သောကျမလား၊ ကျောဖီ သောကျမလား။
(v) 吸 xī သောကျသညျ။ ရှူသညျ။ စုပျသညျ။
ဒီဝေါဟာရကတော့ ဆေးလိပျသောကျတာမှာ သုံးပါတယျ။
ဒီမှာ ဆေးလိပျသောကျလို့ မရဘူး။
(v) 服 fú သောကျသညျ။ မှီဝဲသုံးဆောငျသညျ
ဒီဝေါဟာရကတော့ ဆေးသောကျတာမှာ သုံးပါတယျ။
ဆေးဗူးပျေါမှာ ဆေးသောကျရမယျ့ အညှနျးပါတယျ။
"အိပ်ချင်တာ" ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
"အိပ်တယ်" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တရုတ်လို 睡觉 shuì jiào လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီဝေါဟာရကိုရော သင်သုံးဖူးပါသလား။
အိပ်ချင်သော (adj) 困 kùn
Wǒ kùn le.
Nǐ kùn ma?
Wǒ hái hěn kùn.
ငါ အရမ်း အိပ်ချင်နေသေးတယ်။
"အိပျခငျြတာ" ကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောမလဲ။
"အိပျတယျ" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တရုတျလို 睡觉 shuì jiào လို့ ပွောပါတယျ။ ဒီဝေါဟာရကိုရော သငျသုံးဖူးပါသလား။
အိပျခငျြသော (adj) 困 kùn
ငါ အရမျး အိပျခငျြနသေေးတယျ။
1:06 AM C-Dialogue , Chinese
မိမိ ခရီးထွက်သွားတဲ့မြို့မှာ သူငယ်ချင်းကလည်း အလည်ရောက်နေတာကို မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့တဲ့အခါ ဒီလိုပြောကြတယ်။
☞ Nǐ zěnme yě zài Shànghǎi?
☞ နီးဇဲင်zမဲာ့ယယ် ဇိုက်zရှန့်h(င်)ဟိုင်
☞ မင်း ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရှန်ဟိုင်းမှာ ရှိနေတာလဲ။
☞ Wǒ lái Shànghǎi chūchāi, nǐ ne?
☞ ဝေါ်လိုင်ရှန့်h(င်)ဟိုင် ချူးhချိုင်းh နီနဲ
☞ ငါ ရှန်ဟိုင်းကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ လာတာပါ၊ မင်းရော။
☞ Wǒ gēn péngyǒu yìqǐ lái lǚxíng.
☞ ဝေါ်ကဲင်းဖဲင်း(င်)ယို ယိချီလိုင်းလွီရှင်(င်)
☞ ငါက သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ခရီးထွက်လာတာပါ။
☞ Zhēn shì tài qiǎo le!
☞ ကျဲင်းhရှစ်h ထိုက်ချောင်လဲာ့
☞ တကယ် တိုက်ဆိုင်တာပဲ။
☞ Shì a. Nǐ zài Shànghǎi dāi jǐ tiān?
☞ ရှစ်hအား နီဇိုက်zရှန့်h(င်)ဟိုင် တိုင်းကျီထျန်း
☞ ဟုတ်တယ်။ မင်း ရှန်ဟိုင်းမှာ ဘယ်နှစ်ရက်နေမှာလဲ။
☞ Yí ge xīngqī, zhè zhōuliù wǎnshang de fēijī huí jiā.
☞ ယီကဲာ့ရှင်း(င်)ချီး ကျဲ့hကျိုးhလျို့ဝမ်ရှန့်h(င်)တဲ့ ဖေးfကျီး ဟွေကျား
☞ တစ်ပါတ်ပေါ့၊ ဒီတစ်ပါတ်စနေနေ့ ညနေ လေယာဉ်နဲ့ ပြန်မယ်လေ။
☞ Wǒ yě zhōuliù wǎnshang zǒu, búguò wǒmen yào zuò huǒchē.
☞ ဝေါယယ် ကျိုးhလျို့ဝမ်ရှန့်h(င်)ဇိုz ပူကော့ ဝေါ်မဲင်ယောက်ဇော့z ဟော်ချဲh
☞ ငါလည်း စနေနဲ့ညနေ ပြန်မှာ၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့က ရထားစီးရအုံးမယ်။
☞ Zhōuliù nǐ yǒu shíjiān ma? Wǒmen yìqǐ chī wǎnfàn ba.
☞ ကျိုးhလျို့ နီးယိုရှီhကျန်းမား ဝေါ်မဲင်ယိချီ ချီးhဝမ်ဖန့်fပါ့
☞ စနေနေ့ မင်းမှာ အချိန်ရှိလား။ ငါတို့ အတူတူ ညစာစားကြရအောင်။
☞ Hǎo a, wǒ gēn wǒ péngyǒu shuō yìshēng.
☞ ဟောင်အား ဝေါ်ကဲင်းဝေါ်ဖဲင်း(င်)ယို ရှောhယိရှဲင်းh(င်)
☞ ကောင်းပြီလေ၊ ငါ့သူငယ်ချင်းကို ငါ တချက်ပြောလိုက်အုံးမယ်။
B: 我得先 走了，周六见！
☞ Wǒ děi xiān zǒu le, zhōuliù jiàn!
☞ ဝေါတေ ရှန်းဇိုzလဲာ့ ကျိုးhလျို့ကျန့်
☞ ငါ သွားနှင့်တော့မယ်၊ စနေနေ့ တွေ့ကြတာပေါ့။
မိမိ ခရီးထှကျသှားတဲ့မွို့မှာ သူငယျခငျြးကလညျး အလညျရောကျနတောကို မမြှျောလငျ့ဘဲ တှတေဲ့အခါ ဒီလိုပွောကွတယျ။
☞ နီးဇဲငျzမဲာ့ယယျ ဇိုကျzရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျ
☞ မငျး ဘယျလိုလုပျပွီး ရှနျဟိုငျးမှာ ရှိနတောလဲ။
☞ ဝျေါလိုငျရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျ ခြူးhခြိုငျးh နီနဲ
☞ ငါ ရှနျဟိုငျးကို အလုပျကိစ်စနဲ့ လာတာပါ၊ မငျးရော။
☞ ဝျေါကဲငျးဖဲငျး(ငျ)ယို ယိခြီလိုငျးလှီရှငျ(ငျ)
☞ ငါက သူငယျခငျြးနဲ့အတူ ခရီးထှကျလာတာပါ။
☞ ကြဲငျးhရှဈh ထိုကျခြောငျလဲာ့
☞ တကယျ တိုကျဆိုငျတာပဲ။
☞ ရှဈhအား နီဇိုကျzရှနျ့h(ငျ)ဟိုငျ တိုငျးကြီထနျြး
☞ ဟုတျတယျ။ မငျး ရှနျဟိုငျးမှာ ဘယျနှဈရကျနမှောလဲ။
☞ ယီကဲာ့ရှငျး(ငျ)ခြီး ကြဲ့hကြိုးhလြို့ဝမျရှနျ့h(ငျ)တဲ့ ဖေးfကြီး ဟှကြေား
☞ တဈပါတျပေါ့၊ ဒီတဈပါတျစနနေေ့ ညနေ လယောဉျနဲ့ ပွနျမယျလေ။
☞ ဝေါယယျ ကြိုးhလြို့ဝမျရှနျ့h(ငျ)ဇိုz ပူကော့ ဝျေါမဲငျယောကျဇော့z ဟျောခြဲh
☞ ငါလညျး စနနေဲ့ညနေ ပွနျမှာ၊ ဒါပမေယျ့ ငါတို့က ရထားစီးရအုံးမယျ။
☞ ကြိုးhလြို့ နီးယိုရှီhကနျြးမား ဝျေါမဲငျယိခြီ ခြီးhဝမျဖနျ့fပါ့
☞ စနနေေ့ မငျးမှာ အခြိနျရှိလား။ ငါတို့ အတူတူ ညစာစားကွရအောငျ။
☞ ဟောငျအား ဝျေါကဲငျးဝျေါဖဲငျး(ငျ)ယို ရှောhယိရှဲငျးh(ငျ)
☞ ကောငျးပွီလေ၊ ငါ့သူငယျခငျြးကို ငါ တခကျြပွောလိုကျအုံးမယျ။
☞ ဝေါတေ ရှနျးဇိုzလဲာ့ ကြိုးhလြို့ကနျြ့
☞ ငါ သှားနှငျ့တော့မယျ၊ စနနေေ့ တှကွေ့တာပေါ့။
12:57 AM C-Text , Chinese
ဘုရားရောက်တဲ့အခါ မိမိရဲ့ မွေးနံထောင့်မှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ရေသက်စေ့ ပူဇော်သပ္ပာယ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
星期一角 xīng qī yī jiǎo
星期二角 xīng qī èr jiǎo
星期三角 xīng qī sān jiǎo
西北角 xī běi jiǎo
无牙象 wú yá xiàng
星期四角 xīng qī sì jiǎo
星期五角 xīng qī wǔ jiǎo
天竺鼠 tiān zhú shǔ
星期六角 xīng qī liù jiǎo
星期日角 xīng qī rì jiǎo
鹏鸟 péng niǎo
Dàjīntǎ yìzhōu yǒu gègè bù tǒng shǔxiàng de rén yīnggāi bài de dìfāng,
ရွှေတိဂုံဘုရား ပတ်လည်မှာ မွေးနံအလိုက် ရှိခိုးကန်တော့ရတဲ့ နေရာတွေရှိကြပါတယ်၊
rúguǒ nǐ shì xīngqīyī chūshēng de,
တကယ်လို့ သင်က တနင်္လာသားဆိုရင်၊
jiù dào xīngqīyī jiǎo lái xiàng fóxiàng gòngfèng huā, qízi jí yùfó yǐ qídǎo jí xǔyuàn.
တနင်္လာထောင့်မှာ ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ပန်းနဲ့ တံခွန်ကုက္ကားတွေ ကပ်လှူပူဇော်ကာ ရေသပ္ပာယ်ပြီး ဆုတောင်းရပါတယ်။
Yùfó jiù shì yòng shuǐ gěi fóxiàng jiāoshuǐ.
ဘုရားကို ရေသပ္ပာယ်တယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကို ရေလောင်းပေးရတာပါ။
ránhòu gěi xiàmiàn de hǔxiàng jiāoshuǐ,
ပြီးတော့ အောက်ဘက်နားမှာရှိတဲ့ ကျားရုပ်ကို ရေလောင်းရပါတယ်။
rúguǒ nǐ èrshí suì jiù jiāo èrshí bēi, wǔshí suì jiù jiāo wǔshí bēi, yǐ shì qiánchéng de tóngshí yě dài lái hǎoyùn.
တကယ်လို့ သင်က အသက် ၂၀ ဆိုရင် ရေခွက် ၂၀ လောင်းရပါတယ်၊ အသက် ၅၀ ဆိုရင် ရေခွက် ၅၀ လောင်းရပါတယ်၊ ကြည်ညိုသဒ္ဒါစိတ်ကို ဖော်ပြသလို ကံကောင်းခြင်းတွေ ရောက်ရှိလာစေဖို့ပါ။
ဘုရားရောကျတဲ့အခါ မိမိရဲ့ မှေးနံထောငျ့မှာ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောကို ရသေကျစေ့ ပူဇျောသပ်ပာယျလေ့ ရှိကွပါတယျ။
ရှတေိဂုံဘုရား ပတျလညျမှာ မှေးနံအလိုကျ ရှိခိုးကနျတော့ရတဲ့ နရောတှရှေိကွပါတယျ၊
တကယျလို့ သငျက တနင်ျလာသားဆိုရငျ၊
တနင်ျလာထောငျ့မှာ ဘုရားဆငျးတုတျောကို ပနျးနဲ့ တံခှနျကုက်ကားတှေ ကပျလှူပူဇျောကာ ရသေပ်ပာယျပွီး ဆုတောငျးရပါတယျ။
ဘုရားကို ရသေပ်ပာယျတယျဆိုတာ ဗုဒ်ဓဆငျးတုတျောကို ရလေောငျးပေးရတာပါ။
ပွီးတော့ အောကျဘကျနားမှာရှိတဲ့ ကြားရုပျကို ရလေောငျးရပါတယျ။
တကယျလို့ သငျက အသကျ ၂၀ ဆိုရငျ ရခှေကျ ၂၀ လောငျးရပါတယျ၊ အသကျ ၅၀ ဆိုရငျ ရခှေကျ ၅၀ လောငျးရပါတယျ၊ ကွညျညိုသဒ်ဒါစိတျကို ဖျောပွသလို ကံကောငျးခွငျးတှေ ရောကျရှိလာစဖေို့ပါ။
12:47 AM C-Dialogue , Chinese
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အလုပ်ရသွားလို့ မြို့ထဲက တိုက်ခန်းကို အိမ်ပြောင်းတော့မယ့်အကြောင်း ပြောကြည့်ရအောင်။
☞ Lǐ lì, nǐ zài gànma, wèishénme fángzi zhème luàn?
☞ လီလိ နီဇိုက်zကန့်မာ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ဖန်f(င်)ဇစ်z ကျဲ့hမဲာ့လွမ့်
☞ လီလိရေ၊ မင်း ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ အခန်းက ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ရှုပ်ပွနေတာလဲ။
☞ Wǒ yào bānjiā le, zhèngzài dǎbāo ne.
☞ ဝေါ်ယောက်ပန်းကျားလဲာ့ ကျဲင့်h(င်)ဇိုက်zတာပေါင်းနဲ
☞ ငါ အိမ်ပြောင်းတော့မယ်လေ၊ ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းနေတာပေါ့။
☞ Wèishénme bānjiā? Nǐ bù xǐhuan zhù zhèr ma?
☞ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပန်းကျား နီပုရှီဟွမ်း ကျုhကျဲ့hအဲယ်rမား
☞ ဘာလို့ အိမ်ပြောင်းတာလဲ။ မင်း ဒီမှာနေရတာ မကြိုက်ဘူးလား။
☞ Xǐhuan, búguò wǒ zhǎodào gōngzuò le, zài shìzhōngxīn. Měitiān shàngxiàbān zuò dìtiě tài máfan le.
☞ ရှီဟွမ်း ပူကော့ ဝေါကျောင်hတောက် ကုံး(င်)ဇော့zလဲာ့ ဇိုက်zရှစ်hကျုံးh(င်)ရှင်း မေထျန်း ရှန့်h(င်)ရှာ့ပန်း ဇော့zတိထျယ် ထိုက်မားဖန်fလဲာ့
☞ ကြိုက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါ အလုပ်ရှာလို့ရသွားပြီလေ၊ မြို့ထဲမှာပေါ့။ နေ့တိုင်း ရုံးတက်ရုံးဆင်းက မြေအောက်ရထားစီးရတာ အရမ်း ဒုက္ခရောက်တယ်။
☞ Hái kěyǐ ba, bú dào yí ge xiǎoshí jiù néng dào jiā. Shìzhōngxīn de gōngyù hěn guì ba?
☞ ဟိုင်ခဲယ်းယီပါ့ ပူတောက် ယီကဲာ့ရှောင်ရှီh ကျို့နဲင်(င်)တောက်ကျား ရှစ်hကျုံးh(င်)ရှင်းတဲ့ကုံး(င်)ယွိ ဟဲင်ကွေ့ပါ့
☞ မဆိုးပါဘူး၊ တစ်နာရီအတွင်း အိမ်ပြန်ရောက်နိုင်တာပေါ့။ မြို့ထဲက တိုက်ခန်းတွေက အရမ်းဈေးကြီးမှာပေါ့နော်။
☞ Guì shì guì le xiē, búguò hěn fāngbiàn. Wǒ de gōngyù fùjìn yǒu hěn duō jiǔbā, wǎnshang kěyǐ hé péngyǒu qù hē jiǔ.
☞ ကွေ့ရှစ်h ကွေ့လဲာ့ရှဲ ပူကော့ ဟဲင်ဖန်းf(င်)ပြန့် ဝေါ်တဲ့ကုံး(င်)ယွိ ဖုfကျင့်ယို ဟဲင်တောကျိုပါး ဝမ်ရှန့်h(င်) ခဲယ်းယီဟဲယ်ဖဲင်း(င်)ယို ချွိဟဲယ်းကျို
☞ ဈေးတော့ နည်းနည်းပိုကြီးတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် အရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ငါ့တိုက်ခန်းနားမှာ အရက်ဘားတွေ အများကြီးပဲ၊ ညပိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ အရက်သွားသောက်လို့ရတာပေါ့။
☞ Hǎo ba. Wǒ míngbai le, nǐ shì xǐhuan shìzhōngxīn de yè shēnghuó a!
☞ ဟောင်ပါ့ ဝေါ်မျင်း(င်)ပိုင်လဲာ့ နီရှစ်hရှီဟွမ်း ရှစ်hကျုံးh(င်)ရှင်းတဲ့ ယဲ့ရှဲင်းh(င်)ဟော်အား
☞ ကောင်းပါပြီ။ ငါ သဘောပေါက်သွားပြီ၊ မင်းက မြို့ထဲက ညပိုင်းအပျော်အပါးတွေကို သဘောကျတာကိုး။
သူငယျခငျြးတဈယောကျ အလုပျရသှားလို့ မွို့ထဲက တိုကျခနျးကို အိမျပွောငျးတော့မယျ့အကွောငျး ပွောကွညျ့ရအောငျ။
☞ လီလိ နီဇိုကျzကနျ့မာ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ဖနျf(ငျ)ဇဈz ကြဲ့hမဲာ့လှမျ့
☞ လီလိရေ၊ မငျး ဘာလုပျနတောလဲ၊ အခနျးက ဘာလို့ ဒီလောကျတောငျ ရှုပျပှနတောလဲ။
☞ ဝျေါယောကျပနျးကြားလဲာ့ ကြဲငျ့h(ငျ)ဇိုကျzတာပေါငျးနဲ
☞ ငါ အိမျပွောငျးတော့မယျလေ၊ ထုပျပိုးသိမျးဆညျးနတောပေါ့။
☞ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပနျးကြား နီပုရှီဟှမျး ကြုhကြဲ့hအဲယျrမား
☞ ဘာလို့ အိမျပွောငျးတာလဲ။ မငျး ဒီမှာနရေတာ မကွိုကျဘူးလား။
☞ ရှီဟှမျး ပူကော့ ဝေါကြောငျhတောကျ ကုံး(ငျ)ဇော့zလဲာ့ ဇိုကျzရှဈhကြုံးh(ငျ)ရှငျး မထေနျြး ရှနျ့h(ငျ)ရှာ့ပနျး ဇော့zတိထယျြ ထိုကျမားဖနျfလဲာ့
☞ ကွိုကျပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ငါ အလုပျရှာလို့ရသှားပွီလေ၊ မွို့ထဲမှာပေါ့။ နတေို့ငျး ရုံးတကျရုံးဆငျးက မွအေောကျရထားစီးရတာ အရမျး ဒုက်ခရောကျတယျ။
☞ ဟိုငျခဲယျးယီပါ့ ပူတောကျ ယီကဲာ့ရှောငျရှီh ကြို့နဲငျ(ငျ)တောကျကြား ရှဈhကြုံးh(ငျ)ရှငျးတဲ့ကုံး(ငျ)ယှိ ဟဲငျကှပေ့ါ့
☞ မဆိုးပါဘူး၊ တဈနာရီအတှငျး အိမျပွနျရောကျနိုငျတာပေါ့။ မွို့ထဲက တိုကျခနျးတှကေ အရမျးဈေးကွီးမှာပေါ့နျော။
☞ ကှရှေ့ဈh ကှလေဲ့ာ့ရှဲ ပူကော့ ဟဲငျဖနျးf(ငျ)ပွနျ့ ဝျေါတဲ့ကုံး(ငျ)ယှိ ဖုfကငျြ့ယို ဟဲငျတောကြိုပါး ဝမျရှနျ့h(ငျ) ခဲယျးယီဟဲယျဖဲငျး(ငျ)ယို ခြှိဟဲယျးကြို
☞ ဈေးတော့ နညျးနညျးပိုကွီးတာပေါ့၊ ဒါပမေယျ့ အရမျး အဆငျပွပေါတယျ။ ငါ့တိုကျခနျးနားမှာ အရကျဘားတှေ အမြားကွီးပဲ၊ ညပိုငျးမှာ သူငယျခငျြးနဲ့ အရကျသှားသောကျလို့ရတာပေါ့။
☞ ဟောငျပါ့ ဝျေါမငျြး(ငျ)ပိုငျလဲာ့ နီရှဈhရှီဟှမျး ရှဈhကြုံးh(ငျ)ရှငျးတဲ့ ယဲ့ရှဲငျးh(ငျ)ဟျောအား
☞ ကောငျးပါပွီ။ ငါ သဘောပေါကျသှားပွီ၊ မငျးက မွို့ထဲက ညပိုငျးအပြျောအပါးတှကေို သဘောကတြာကိုး။
12:40 AM C-Text , Chinese
ရှေးခေတ်က စာဆိုတော် လူဦးမင်းက ကွမ်းယာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖွဲ့နွဲ့ရေးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ စာရှုသူတို့လည်း ကြားဖူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
Dédáwú de bīngláng huángnènyè,
Émiè de yānyè,
Dōngyù de bīnglángguǒ yǔ
Shíjiē shíhuī, Bēi érchá,
biān jiǎo biān tǔ ba.
文学大师 - 鲁吴敏
wénxué dàshī - Lǔ wú mǐn
စာဆို - လူဦးမင်း
ရှေးခတျေက စာဆိုတျော လူဦးမငျးက ကှမျးယာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကဗြာလေးတဈပုဒျကို ဖှဲ့နှဲ့ရေးစပျခဲ့ပါတယျ။ စာရှုသူတို့လညျး ကွားဖူးကွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။
စာဆို - လူဦးမငျး
12:25 AM C-Word , Chinese
မိမိရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ သင်သိချင်ပါသလား။ ဒီမှာ လေ့လာကြည့်ပါ။
爷爷 yé ye ယယ်ယဲ့
အဘိုး (အဖေ၏ အဖေ)
奶奶 nǎi nai နိုင်နိုက်
အဘွား (အဖေ၏ အမေ)
姥爷 lǎo ye လောင်ယယ်
外公 wài gōng ဝိုက်ကုံး(င်)
အဘိုး (အမေ၏ အဖေ)
姥姥 lǎo lao လောင်းလောင်
外婆 wài pó ဝိုက်ဖော်
အဘွား (အမေ၏ အမေ)
太太 tài tai ထိုက်ထိုက်
(အဖေဘက်) အဘိုး၊ အဘွား၏ အမေ
太爷 tài yé ထိုက်ယယ်
(အဖေဘက်) အဘိုး၊ အဘွား၏ အဖေ
太姥姥 tài lǎo lao ထိုက်လောင်းလောင်
(အမေဘက်) အဘိုး၊ အဘွား၏ အမေ
太姥爷 tài lǎo yé ထိုက်လောင်ယယ်
(အမေဘက်) အဘိုး၊ အဘွား၏ အဖေ
姑奶奶 gū nǎi nai ကူးနိုင်နိုက်
(အဖေဘက်) အဘိုး၏ အစ်မ၊ ညီမ
姑爷 gū ye ကူးယယ်
(အဖေဘက်) အဘိုး၏ အစ်မ၊ ညီမ၏ ခင်ပွန်း
姨奶奶 yí nǎi nai ယီနိုင်နိုက်
(အဖေဘက်) အဘွား၏ အစ်မ၊ ညီမ
姨爷 yí yé ယီးယယ်
(အဖေဘက်) အဘွား၏ အစ်မ၊ ညီမ၏ ခင်ပွန်း
舅爷 jiù yé ကျို့ယယ်
(အဖေဘက်) အဘွား၏ အစ်ကို၊ မောင်
舅奶奶 jiù nǎi nai ကျို့နိုင်နိုက်
(အဖေဘက်) အဘွား၏ အစ်ကို၊ မောင်၏ ဇနီး
姑姥姥 gū lǎo lao ကူးလောင်းလောင်
(အမေဘက်) အဘိုး၏ အစ်မ၊ ညီမ
姑姥爷 gū lǎo yé ကူးလောင်ယယ်
(အမေဘက်) အဘိုး၏ အစ်မ၊ ညီမ၏ ခင်ပွန်း
姨姥姥 yí lǎo lao ယီးလောင်းလောင်
(အမေဘက်) အဘွား၏ အစ်မ၊ ညီမ
姨姥爷 yí lǎo yé ယီးလောင်ယယ်
(အမေဘက်) အဘွား၏ အစ်မ၊ ညီမ၏ ခင်ပွန်း
舅姥爷 jiù lǎo yé ကျို့လောင်ယယ်
(အမေဘက်) အဘွား၏ အစ်ကို၊ မောင်
舅姥姥 jiù lǎo lao ကျို့လောင်းလောင်
(အမေဘက်) အဘွား၏ အစ်ကို၊ မောင်၏ ဇနီး
伯伯 bó bo ပေါ်ပေါ
大爷 dà yé တာ့ယယ်
ဦးကြီး (အဖေ၏ အစ်ကို)
伯母 bó mǔ ပေါမူ
ဒေါ်ကြီး (အဖေ့ အစ်ကို၏ ဇနီး)
叔叔 shū shu ရှူးhရှုh
ဦးလေး (အဖေ၏ ညီ)
婶婶 shěn shen ရှဲင်းhရှင်h
ဒေါ်လေး (အဖေ့ ညီ၏ ဇနီး)
姑姑 gū gu ကူးကူး
အဒေါ် (အဖေ၏ အစ်မ၊ ညီမ)
姑父 gū fu ကူးဖုf
ဦးလေး (အဖေ့ အစ်မ၊ ညီမ၏ ခင်ပွန်း)
舅舅 jiù jiu ကျို့ကျို့
ဦးလေး (အမေ၏ အစ်ကို၊ မောင်)
舅妈 jiù mā ကျို့မား
ဒေါ်လေး (အမေ့ အစ်ကို၊ မောင်၏ ဇနီး)
阿姨 ā yí အားယီ
ဒေါ်လေး (အမေ၏ အစ်မ၊ ညီမ)
姨父 yí fù ယီဖုf
ဦးလေး (အမေ့ အစ်မ၊ ညီမ၏ ခင်ပွန်း)
哥哥 gē ge ကဲယ်းကဲာ့
姐姐 jiě jie ကျယ်ကျဲ
弟弟 dì di တိတီ
妹妹 mèi mei မေ့မေ
堂兄 táng xiōng ထန်(င်)ရှုံး(င်)
堂弟 táng dì ထန်(င်)တိ
堂姐 táng jiě ထန်း(င်)ကျယ်
堂妹 táng mèi ထန်(င်)မေ့
表哥 biǎo gē ပြောင်ကဲယ်း
表弟 biǎo dì ပြောင်တိ
表姐 biǎo jiě ပြောင်းကျယ်
表妹 biǎo mèi ပြောင်မေ့
弟妹 dì mèi တိမေ့
姐夫 jiě fū ကျယ်ဖူးf
妹夫 mèi fū မေ့ဖူးf
侄子 zhí zi ကျီhဇစ်z
တူ (အစ်ကို၊ ညီ၏ သား)
侄媳妇 zhí xí fu ကျီးhရှီဖုf
侄女 zhí nǚ ကျီးhနွီ
တူမ (အစ်ကို၊ ညီ၏ သမီး)
侄女婿 zhí nǚ xù ကျီးhနွီရွှိ
外甥 wài sheng ဝိုက်ရှဲင်းh(င်)
တူ (အစ်မ၊ ညီမ၏ သား)
外甥媳妇 wài sheng xí fu ဝိုက်ရှဲင်းh(င်)ရှီဖုf
外甥女 wài sheng nǚ ဝိုက်ရှဲင်းh(င်)နွီ
တူမ (အစ်မ၊ ညီမ၏ သမီး)
外甥女婿 wài sheng nǚ xu ဝိုက်ရှဲင်းh(င်)နွီရွှိ
大伯子 dà bó zi တာ့ပေါ်ဇစ်z
ခဲအို (ခင်ပွန်း၏ အစ်ကို)
大伯娘 dà bó niáng တာ့ပေါနျန်(င်)
လင်ညီအစ်မ (ခင်ပွန်း၏ အစ်ကို၏ ဇနီး)
小叔子 xiǎo shū zi ရှောင်ရှူးhဇစ်z
မတ် (ခင်ပွန်း၏ ညီ)
小婶子 xiǎo shěn zi ရှောင်းရှဲင်hဇစ်z
လင်ညီအစ်မ (ခင်ပွန်း၏ ညီ၏ ဇနီး)
大姑子 dà gū zi တာ့ကူးဇစ်z
ယောင်းမ (ခင်ပွန်း၏ အစ်မ)
小姑子 xiǎo gū zi ရှောင်ကူးဇစ်z
ယောင်းမ (ခင်ပွန်း၏ ညီမ)
大舅子 dà jiù zi တာ့ကျို့ဇစ်z
ယောက်ဖ (ဇနီး၏ အစ်ကို)
大妗子 dà jìn zi တာ့ကျင့်ဇစ်z
ဇနီး၏ အစ်ကို၏ ဇနီး
小舅子 xiǎo jiù zi ရှောင်ကျို့ဇစ်z
ယောက်ဖ (ဇနီး၏ မောင်)
小妗子 xiǎo jìn zi ရှောင်ကျင့်ဇစ်z
ဇနီး၏ မောင်၏ ဇနီး
大姨子 dà yí zi တာ့ယီဇစ်z
မရီး (ဇနီး၏ အစ်မ)
小姨子 xiǎo yí zi ရှောင်ယီဇစ်z
ခယ်မ (ဇနီး၏ ညီမ)
连襟 lián jīn လျန်ကျင်း
မယားညီအစ်ကို (ဇနီး၏ အစ်မ၊ ညီမ၏ ခင်ပွန်း)
公公 gōng gong ကုံး(င်)ကုံး(င်)
ယောက္ခမ (ခင်ပွန်း၏ အဖေ)
婆婆 pó po ဖော်ဖော
ယောက္ခမ (ခင်ပွန်း၏ အမေ)
岳父 yuè fù ယွဲ့ဖုf
ယောက္ခမ (ဇနီး၏ အဖေ)
岳母 yuè mǔ ယွဲ့မူ
ယောက္ခမ (ဇနီး၏ အမေ)
儿子 ér zi အယ်rဇစ်z
长子 zhǎng zǐ ကျန်းh(င်)ဇီz
媳婦 xí fu ရှီဖုf
女儿 nǚ ér နွီအဲယ်r
女婿 nǚ xù နွီရွှိ
孫子 sūn zi စွင်းဇစ်z
မြေး (သား၏ သား)
孫媳婦 sūn xí fu စွင်းရှီဖုf
孫女 sūn nǚ စွင်းနွီ
မြေးမ (သား၏ သမီး)
孫女婿 sūn nǚ xu စွင်းနွီရွှိ
外孫 wài sūn ဝိုက်စွင်း
မြေး (သမီး၏ သား)
外孫媳婦 wài sūn xí fu ဝိုက်စွင်းရှီဖုf
外孫女 wài sūn nǚ ဝိုက်စွင်းနွီ
မြေးမ (သမီး၏ သမီး)
外孫女婿 wài sūn nǚ xu ဝိုက်စွင်းနွီရွှိ
养父 yǎng fù ယန်(င်)ဖုf
养母 yǎng mǔ ယန်း(င်)မူ
养子 yǎng zǐ ယန်း(င်)ဇီz
养女 yǎng nǚ ယန်း(င်)နွီ
继父 jì fù ကျိဖုf
继母 jì mǔ ကျိမူ
继子 jì zǐ ကျိဇီz
继女 jì nǚ ကျိနွီ
小三 xiǎo sān ရှောင်စန်း
小老公 xiǎo lǎo gōng ရှောင်းလောင်ကုံး(င်)
မိမိရဲ့ မိသားစုဝငျတှကေို တရုတျလို ဘယျလိုချေါရမလဲ သငျသိခငျြပါသလား။ ဒီမှာ လလေ့ာကွညျ့ပါ။
爷爷 yé ye ယယျယဲ့
အဘိုး (အဖေ၏ အဖေ)
奶奶 nǎi nai နိုငျနိုကျ
အဘှား (အဖေ၏ အမေ)
姥爷 lǎo ye လောငျယယျ
外公 wài gōng ဝိုကျကုံး(ငျ)
အဘိုး (အမေ၏ အဖေ)
姥姥 lǎo lao လောငျးလောငျ
外婆 wài pó ဝိုကျဖျော
အဘှား (အမေ၏ အမေ)
太太 tài tai ထိုကျထိုကျ
(အဖဘေကျ) အဘိုး၊ အဘှား၏ အမေ
太爷 tài yé ထိုကျယယျ
(အဖဘေကျ) အဘိုး၊ အဘှား၏ အဖေ
太姥姥 tài lǎo lao ထိုကျလောငျးလောငျ
(အမဘေကျ) အဘိုး၊ အဘှား၏ အမေ
太姥爷 tài lǎo yé ထိုကျလောငျယယျ
(အမဘေကျ) အဘိုး၊ အဘှား၏ အဖေ
姑奶奶 gū nǎi nai ကူးနိုငျနိုကျ
(အဖဘေကျ) အဘိုး၏ အဈမ၊ ညီမ
姑爷 gū ye ကူးယယျ
(အဖဘေကျ) အဘိုး၏ အဈမ၊ ညီမ၏ ခငျပှနျး
姨奶奶 yí nǎi nai ယီနိုငျနိုကျ
(အဖဘေကျ) အဘှား၏ အဈမ၊ ညီမ
姨爷 yí yé ယီးယယျ
(အဖဘေကျ) အဘှား၏ အဈမ၊ ညီမ၏ ခငျပှနျး
舅爷 jiù yé ကြို့ယယျ
(အဖဘေကျ) အဘှား၏ အဈကို၊ မောငျ
舅奶奶 jiù nǎi nai ကြို့နိုငျနိုကျ
(အဖဘေကျ) အဘှား၏ အဈကို၊ မောငျ၏ ဇနီး
姑姥姥 gū lǎo lao ကူးလောငျးလောငျ
(အမဘေကျ) အဘိုး၏ အဈမ၊ ညီမ
姑姥爷 gū lǎo yé ကူးလောငျယယျ
(အမဘေကျ) အဘိုး၏ အဈမ၊ ညီမ၏ ခငျပှနျး
姨姥姥 yí lǎo lao ယီးလောငျးလောငျ
(အမဘေကျ) အဘှား၏ အဈမ၊ ညီမ
姨姥爷 yí lǎo yé ယီးလောငျယယျ
(အမဘေကျ) အဘှား၏ အဈမ၊ ညီမ၏ ခငျပှနျး
舅姥爷 jiù lǎo yé ကြို့လောငျယယျ
(အမဘေကျ) အဘှား၏ အဈကို၊ မောငျ
舅姥姥 jiù lǎo lao ကြို့လောငျးလောငျ
(အမဘေကျ) အဘှား၏ အဈကို၊ မောငျ၏ ဇနီး
伯伯 bó bo ပျေါပေါ
大爷 dà yé တာ့ယယျ
ဦးကွီး (အဖေ၏ အဈကို)
伯母 bó mǔ ပေါမူ
ဒျေါကွီး (အဖေ့ အဈကို၏ ဇနီး)
叔叔 shū shu ရှူးhရှုh
ဦးလေး (အဖေ၏ ညီ)
婶婶 shěn shen ရှဲငျးhရှငျh
ဒျေါလေး (အဖေ့ ညီ၏ ဇနီး)
အဒျေါ (အဖေ၏ အဈမ၊ ညီမ)
ဦးလေး (အဖေ့ အဈမ၊ ညီမ၏ ခငျပှနျး)
舅舅 jiù jiu ကြို့ကြို့
ဦးလေး (အမေ၏ အဈကို၊ မောငျ)
舅妈 jiù mā ကြို့မား
ဒျေါလေး (အမေ့ အဈကို၊ မောငျ၏ ဇနီး)
ဒျေါလေး (အမေ၏ အဈမ၊ ညီမ)
ဦးလေး (အမေ့ အဈမ၊ ညီမ၏ ခငျပှနျး)
哥哥 gē ge ကဲယျးကဲာ့
姐姐 jiě jie ကယျြကြဲ
妹妹 mèi mei မမေ့ေ
堂兄 táng xiōng ထနျ(ငျ)ရှုံး(ငျ)
堂弟 táng dì ထနျ(ငျ)တိ
堂姐 táng jiě ထနျး(ငျ)ကယျြ
堂妹 táng mèi ထနျ(ငျ)မေ့
表哥 biǎo gē ပွောငျကဲယျး
表弟 biǎo dì ပွောငျတိ
表姐 biǎo jiě ပွောငျးကယျြ
表妹 biǎo mèi ပွောငျမေ့
弟妹 dì mèi တိမေ့
姐夫 jiě fū ကယျြဖူးf
妹夫 mèi fū မဖေူ့းf
侄子 zhí zi ကြီhဇဈz
တူ (အဈကို၊ ညီ၏ သား)
侄媳妇 zhí xí fu ကြီးhရှီဖုf
侄女 zhí nǚ ကြီးhနှီ
တူမ (အဈကို၊ ညီ၏ သမီး)
侄女婿 zhí nǚ xù ကြီးhနှီရှိ
外甥 wài sheng ဝိုကျရှဲငျးh(ငျ)
တူ (အဈမ၊ ညီမ၏ သား)
外甥媳妇 wài sheng xí fu ဝိုကျရှဲငျးh(ငျ)ရှီဖုf
外甥女 wài sheng nǚ ဝိုကျရှဲငျးh(ငျ)နှီ
တူမ (အဈမ၊ ညီမ၏ သမီး)
外甥女婿 wài sheng nǚ xu ဝိုကျရှဲငျးh(ငျ)နှီရှိ
大伯子 dà bó zi တာ့ပျေါဇဈz
ခဲအို (ခငျပှနျး၏ အဈကို)
大伯娘 dà bó niáng တာ့ပေါနနျြ(ငျ)
လငျညီအဈမ (ခငျပှနျး၏ အဈကို၏ ဇနီး)
小叔子 xiǎo shū zi ရှောငျရှူးhဇဈz
မတျ (ခငျပှနျး၏ ညီ)
小婶子 xiǎo shěn zi ရှောငျးရှဲငျhဇဈz
လငျညီအဈမ (ခငျပှနျး၏ ညီ၏ ဇနီး)
大姑子 dà gū zi တာ့ကူးဇဈz
ယောငျးမ (ခငျပှနျး၏ အဈမ)
小姑子 xiǎo gū zi ရှောငျကူးဇဈz
ယောငျးမ (ခငျပှနျး၏ ညီမ)
大舅子 dà jiù zi တာ့ကြို့ဇဈz
ယောကျဖ (ဇနီး၏ အဈကို)
大妗子 dà jìn zi တာ့ကငျြ့ဇဈz
ဇနီး၏ အဈကို၏ ဇနီး
小舅子 xiǎo jiù zi ရှောငျကြို့ဇဈz
ယောကျဖ (ဇနီး၏ မောငျ)
小妗子 xiǎo jìn zi ရှောငျကငျြ့ဇဈz
ဇနီး၏ မောငျ၏ ဇနီး
大姨子 dà yí zi တာ့ယီဇဈz
မရီး (ဇနီး၏ အဈမ)
小姨子 xiǎo yí zi ရှောငျယီဇဈz
ခယျမ (ဇနီး၏ ညီမ)
连襟 lián jīn လနျြကငျြး
မယားညီအဈကို (ဇနီး၏ အဈမ၊ ညီမ၏ ခငျပှနျး)
公公 gōng gong ကုံး(ငျ)ကုံး(ငျ)
ယောက်ခမ (ခငျပှနျး၏ အဖေ)
婆婆 pó po ဖျောဖော
ယောက်ခမ (ခငျပှနျး၏ အမေ)
岳父 yuè fù ယှဲ့ဖုf
ယောက်ခမ (ဇနီး၏ အဖေ)
岳母 yuè mǔ ယှဲ့မူ
ယောက်ခမ (ဇနီး၏ အမေ)
儿子 ér zi အယျrဇဈz
长子 zhǎng zǐ ကနျြးh(ငျ)ဇီz
媳婦 xí fu ရှီဖုf
女儿 nǚ ér နှီအဲယျr
女婿 nǚ xù နှီရှိ
孫子 sūn zi စှငျးဇဈz
မွေး (သား၏ သား)
孫媳婦 sūn xí fu စှငျးရှီဖုf
孫女 sūn nǚ စှငျးနှီ
မွေးမ (သား၏ သမီး)
孫女婿 sūn nǚ xu စှငျးနှီရှိ
外孫 wài sūn ဝိုကျစှငျး
မွေး (သမီး၏ သား)
外孫媳婦 wài sūn xí fu ဝိုကျစှငျးရှီဖုf
外孫女 wài sūn nǚ ဝိုကျစှငျးနှီ
မွေးမ (သမီး၏ သမီး)
外孫女婿 wài sūn nǚ xu ဝိုကျစှငျးနှီရှိ
养父 yǎng fù ယနျ(ငျ)ဖုf
养母 yǎng mǔ ယနျး(ငျ)မူ
养子 yǎng zǐ ယနျး(ငျ)ဇီz
养女 yǎng nǚ ယနျး(ငျ)နှီ
继父 jì fù ကြိဖုf
继母 jì mǔ ကြိမူ
继子 jì zǐ ကြိဇီz
继女 jì nǚ ကြိနှီ
小三 xiǎo sān ရှောငျစနျး
小老公 xiǎo lǎo gōng ရှောငျးလောငျကုံး(ငျ)
ဆွေမျိုး - ဆွေမျိုးတော်စပ်ပုံ - အမျိုး - အမျိုးအဆွေ - ဆှမြေိုး - ဆှမြေိုးတျောစပျပုံ - အမြိုး - အမြိုးအဆှေ - မိသားစု - မိသားစုဝင် - မိသားစု - မိသားစုဝငျ
HSK Level 1-6 Mobile Application
HSK Level 1 နမူနာမေးခွန်းနှင့် ဝေါဟာရများ။
HSK Level2pdf စာအုပ်။
လက်စွပ်က တစ်နေ့မှာ မင်းအတွက်ပဲဖြစ်မှာပါ။
သူက အရမ်း မျက်နှာများတာပဲ။
ng ဆိုတာ တရုတ်အသံထွက် ဟုတ်ပါသလား။
ကျွန်တော် Hot Latte တစ်ခွက် ယူမယ်။